Ukusebenza kwe-atherosclerosis yemikhumbi yemikhawulo ephansi: isikhathi nezindleko zokuvuselela > Ukwelashwa nokuvimbela
I-atherosulinosis yemikhawulo ephansi - izindleko zokuxilongwa nokwelashwa
Lapho wenza ukwelashwa kwe-atherosclerosis yemikhumbi yemikhawulo engezansi, zombili izindlela zokwelashwa ezisiza ngosizo lwemithi nokuhlinzwa zingasetshenziswa.
Kungukungabikho komphumela omuhle ovela ekusetshenzisweni kwemithi okuyisibonakaliso sokusetshenziswa kokungenelela kokuhlinzwa.
Ukungenelela kokuhlinzwa kwenziwa esikhathini sekwedlule isikhathi, lapho ukwelashwa kwezidakamizwa kungalethi umphumela omuhle ofunekayo. Ezigabeni zakamuva zokukhula kwalesi sifo, izicubu ezithambile ziyafa bese kuba nenqubo yobugebengu.
Udokotela ohlinzayo we-vascular, ohlelweni lokungenelela kokuhlinzwa, wenza i-excision yezindawo zezicubu eziqhutshwa yi-necrotization. Izindawo ezenziwa ukuthi zihlinzwe zimbozwe ngengubo yesikhumba.
Ukuhlinzwa kwe-atherosclerosis yamaphethelo aphansi esigabeni sokugcina sokuthuthuka kungasiza ekuthuthukiseni kakhulu isimo sempilo kanye nekhwalithi yempilo yesiguli.
Kunezindlela ezahlukahlukene zokungenelela kokuhlinzwa. Izindlela ezivame kakhulu yilezi zindlela ezilandelayo:
Ukuhlinzwa kweBypass - ukuhlinzwa kuqukethe ukudala indlela eyengeziwe yokuhamba kwegazi esizeni somonakalo.
Ukusetshenziswa kwe-balloon angioplasty ngesikhathi senqubo ibhaluni elikhethekile elihlikihla umkhumbi we-arterial.
I-Arterial stenting - ukubekwa ku-artery ye-stent ekhethekile egcina ububanzi besikebhe esingaguquki ezingeni elifunekayo.
I-Endarterectomy - ukususwa kwengxenye yomkhumbi olimele ne-atherosclerotic plaque equkethe kuyo.
I-Autodermoplasty uhlobo lokungenelela kokuhlinzwa okusetshenziswa ekwelapheni izilonda ze-trophic, okunzima ukwelapha ngemithi. Ukuhlinzwa kusiza ukuvikela ukukhula kwenqubo yeziqhumane kwezicubu zomkhawulo ophansi.
I-Prosthetics - inqubo yokufaka esikhundleni somkhumbi ongazenzakaleli noma owenziwe ngengxenye yombhede wethambo owavele wahlupheka ngenxa yokuqhubeka kokuqothula i-atherosulinosis. Indlela yokuhlinzwa ikuvumela ukuthi ubuyisele ukuhambisa kwegazi endaweni elimele.
Ukunqunywa - inqubo yokususa ingxenye ye-necrotic yomlenze, kulandelwa yi-prosthetics.
Ukukhethwa kwendlela yokungenelela kokuhlinzwa kuya ngesilinganiso somonakalo wezicubu zomlenze nezimpawu zomzimba wesiguli ngamunye. Ukuzikhethela kwendlela yokwelashwa kwenziwa ngudokotela ohlinzayo wemithambo owenza ukwelashwa.
Ngemuva kokuhlinzwa, isiguli sizodinga ukwenza inkambo ende yokuvuselela kanye nokwelashwa ngezidakamizwa ukuze sibuyisele indlela ejwayelekile.
Lapho welapha isifo sokuqina kwemithambo yemithambo yendawo engezansi, udokotela, lapho ekhetha indlela yokwelashwa, unquma ukubekezela kwale nqubo kanye nokuthi kungenzeka ukuthi ukusebenza okuningi kusiza kanjani ukuthuthukisa isimo sesiguli ngaphandle kokusebenzisa ezinye izindlela zokungenelela.
Izici zezinhlobo ezahlukene zokwelashwa okuhlinzwa
I-Balloon angioplasty iyindlela yokwelashwa okuhlinza efaka ukwethula embhedeni we-vascular endaweni yokunciphisa i-catheter ekhethekile enebhaluni elikhethekile elikhulayo ekugcineni.
Ngemuva kokufakwa kwe-catheter, i-balloon iqala ukuvuvukala ngaphansi kwengcindezi yokucindezela, okuholela ekunwetshisweni kwezindonga zesikejana kanye nokubuyiselwa kwendlela yokuhambisa igazi.
Uma ukubuyiselwa kokugeleza kwegazi kungenzeki, kufakwa uhlaka olukhethekile emkhakheni womonakalo esitsheni.Umsebenzi walolu luhlaka ukugcina ububanzi besikejana endaweni yomonakalo ezingeni elamukelekayo. Uhlaka lokwethula ngesikhathi senqubo lwenziwe nge-alloy ekhethekile.
Uma umphumela owufunayo ungatholakalanga, khona-ke udokotela oholayo uzonquma ngokusetshenziswa kwendlela evulekile ye-shunt.
Ezimweni eziningi, ukusetshenziswa kwe-balloon angioplasty kukuvumela ukuthi ubuyisele ukujikeleza kwegazi futhi ugweme ukusetshenziswa kokungenelela okubanzi nokuhlukumezanayo.
Ukusetshenziswa kokungenelela kokuqina kokubelethisa kwenza ukuba khona kokuxilongwa okufana ne-Lerish's syndrome kuthuthukise kakhulu izinga lempilo lesiguli. Ngemuva kokungenelela, isimo sokuphuma kwegazi emithanjeni yamaphethelo aphansi sithuthuka kakhulu.
Ukuhlinzwa ngepulasitiki kwe-Vascular kanye ne-stinging okwenziwe embhedeni we-vascular we-artery engaphezulu yensimbi ye-femal kuqeda lesi simo esikhona ebusweni bokungabikho komthambo okwenzeka ngemuva kokuvaleka kokukhanya kwesitsha ngesivalo segazi.
Iningi lemitholampilo eholayo emhlabeni ebandakanyeka ekuhlinzweni ngamathambo lithanda indlela ye-balloon angioplasty.
Kaningi, le ndlela isetshenziselwa ukubuyisa ubunikazi bemithambo ye-popliteal.
Indlela ye-balloon angioplasty ihlolwe muva nje.
Kwi-balloon angioplasty, kusetshenziswa amasilinda afaka umuthi ngaphezulu kwezidakamizwa.
Izidakamizwa ezingena odongeni lwe-balloon zidonswa odongeni lwe-vascular futhi zivimbele ukuqhubeka kwesifo.
Ukwemukelwa (kokubonisana) kodokotela ophambili wemithambo
Ukubonisana nodokotela ohlinzayo wemithambo - ukuhlolwa ngudokotela onguchwepheshe weziguli ezinezinsolo ezihlasela i-arterial and vein. Ngenqubo yokubonisana nodokotela ohlinzayo wemithambo, kungadingeka ukwenza izivivinyo ezengeziwe ngesimo se-ultrasound of artery or veins.
Ukwemukelwa (kokubonisana) kwesifo senhliziyo ene-ECG
Ukwemukelwa (kokubonisana) kodokotela ohlinzayo we-vascular, primary
Ukubonisana nodokotela ohlinzayo wamathambo kuyenziwa ukuthola izifo zemithambo yegazi nemithambo nokukhetha indlela yokwelashwa kwe-vascular pathology.
Ukwemukelwa (kokubonisana) kodokotela ohlinzayo we-vascular, kuphindaphindwe
Kwenziwa ukuhlola isimo sesiguli ngemuva kokwelashwa (ngokulondolozwa noma ngokuhlinzwa). Ngokubonisana okuphindaphindiwe, izindlela ezingeziwe zokuxilonga noma zokwelapha zingaphakanyiswa.
Ucwaningo lwe-Transcranial Ultrasound
Ukutadisha kokuhamba kwegazi ngemithambo ye-cerebral usebenzisa isithwebuli se-Ultra enenzwa ekhethekile esebenzisa uhlelo olukhethekile.
I-Ultrasound ye-aorta kanye nemithambo ye-visceral
I-Ultrasound ye-aorta yesisu namagatsha ayo yenziwa ukuthola i-aneurysm ye-aortic, ukuphazamiseka kwe-aorta yesisu, i-renal kanye nemithambo yamathumbu. Kubantu abangaphezu kweminyaka engama-55, kufanele kwenziwe minyaka yonke ukukhipha i-aneurysm nezinkinga zayo, njengendlela yokuhlola.
I-Ultrasound yemithambo yemilenze ephansi
I-Ultrasound angioscanning ye-aorta yesisu nemithambo yemilenze ephansi. Kuyindlela yokufundisa kakhulu yokuxilongwa kwezifo zemithambo yegazi. Emtholampilo wethu, oqhutshwa ngochwepheshe abanolwazi, kumadivayisi asezingeni eliphakeme.
I-Ultrasound yemithambo eyinhloko yekhanda
Ukuhlolwa kwe-Ultrasound kwe-carotid kanye ne-vertebral artery (ultrasound MAG) kuyenzelwa ukukhomba ubungozi bokushaywa yi-ischemic stroke. Namuhla sekufakazelwe ukuthi ukufakwa kwe-atherosulinotic ekunciphiseni imithambo yangaphakathi ye-carotid kukhulisa kakhulu ingozi yokushaywa unhlangothi ngenxa ye-carotid artery thrombosis noma i-embolism (ukudluliswa kwesiqephu sombala) emikhunjini yokuhluza. Lesi sitatimende siyiqiniso ngemithambo ye-vertebral artery.
Indlela yokuxilongwa kwe-ultrasound yenhliziyo, amaphutha ayo, ukusebenza kanye nengcindezi emthanjeni we-pulmonary artery.
I-Angiography ye-aorta kanye namagatsha ayo
I-Angiography yemithambo eyinhloko yekhanda
I-Angiography yemithambo eyinhloko yekhanda ifaka ucwaningo oluhlukile lwe-carotid kanye ne-vertebral artery esebenzisa iyunithi yama-x-ray angiographic. Kusetshenziswa njengendlela yokuxilongwa kokugcina kwe-atherosclerosis kanye ne-pathological tortuosity of the artery main ekhanda nangesikhathi sokuhlinzwa kwe-endovascular ukuqeda ukuncishiswa kwe-carotid noma i-vertebral artery.
Umzimba ophansi we-arteriography
I-Arteriography (i-angiography) yamaphethelo aphansi yindlela eyinhloko yokuxilonga izilonda zemithambo yegazi emilenzeni. Kwenziwa ngepunning ku-aral artery engalweni noma kunoma yikuphi enye i-artery ye-peripheral. Ngemuva kokudilizwa, kufakwa i-catheter ekhethekile emthanjeni, oqhutshelwa emkhakheni wenzalo. Ngemuva kokuthi kufakwe i-catheter, kufakwa umjovo okhethekile othomathikhi, okuthi phakathi kwawo kungeniswe isivinini esikhulu, bese kuthi umshini we-x-ray uvulwe bese kuthathwa uchungechunge lwezithombe. Indawo yokuqhathanisa ibonakala kahle futhi ikuvumela ukuthi uhlole ubunikazi bemikhumbi nokwakheka kodonga lwangaphakathi. I-Angiography inikezela ngemininingwane eminingi ebalulekile edingwa ngodokotela abahlinza imithambo.
Ucwaningo lwemiphumela yokusebenza kwe-shunt evulekile emithanjeni yemilenze ngokushesha ngemuva kokuqala kokuphuma kwegazi. Ikuvumela ukuthi uhlole ngokwanele ukwakhiwa kabusha kwemithambo futhi uthathe izinyathelo lapho ukhomba izinkinga ngombhede noma nge-shunt.
I-Multispiral computed tomography ye-aorta nemithambo yemilenze ephansi
Qhathanisa i-tomography ehlanganisiwe ye-aorta nemithambo yemilenze ephansi. Kuyindlela efundisayo futhi ephephile kakhulu yokuxilongwa kwemithambo yesisu kanye nemilenze.
I-radiology ye-Panoramic yamaphaphu - ukuhlolwa okujwayelekile kwe-x-ray esifubeni ngokuqagela okuqondile. Ikuvumela ukuthi uhlole isimo sohlelo lokuphefumula, inhliziyo, isichazamazwi. Kuyindlela yokuxilonga yokuqeda izinkinga ezinkulu ngamaphaphu nenhliziyo lapho kulungiselelwa ukuhlinzwa okukhulu. Uma kukhona okusolwa nge-pathology kusolwa, ukuqagelwa okwengeziwe kwama-x-ray kumiselwe.
Ukukhetha i-angiography ekhethiwe
Ukwethulwa okhethiweyo kwe-catheter yokuxilonga kanye ne-angiography yemithambo yemilenze ephansi ngayinye.
Izindleko zokuhlinzwa okuvulekile kwemithambo
Ukuhlinzwa kwe-aortic-femoral bypass - ukudala indawo yokugeleza kwegazi emithanjeni evalekile noma emithanjeni ye-iliac. Kwenziwa ngokufakwa ngakwesobunxele kwenkaba nasesinqeni. I-Shunt - isikejana sokufakelwa sinamathiselwe endaweni yokuhamba kwe-aorta bese siyiswa emthanjeni wesifazane. Lokhu kudala indlela yokufakelwa yokuthi igazi lidlule ekuqhekekeni futhi ukugeleza kwegazi emlenzeni kuyabuyiselwa.
I-Aorto-bifemoral prosthetics ene-visceral Branch replantation
I-Aorto-bifemoral prosthetics ngokubuyiselwa kwamagatsha e-visceral isho ukudala ukwakhiwa kokusebenza kwegazi ukugeleza kwe-aorta evalekile. Kwenziwa ngokufakwa ngakwesobunxele kwenkaba nakuzo zombili izinkalo. I-Shunt - isikejana sokufakelwa sinamathele endaweni ethokomelekayo ye-aorta bese siyiswa emthanjeni wesitho sowesifazane. Lokhu kudala indlela yokufakelwa yokuthi igazi lidlule ekuqhekekeni futhi ukugeleza kwegazi emlenzeni kuyabuyiselwa. Nge-occlusion ephezulu ye-aortic, kungadingeka ukubuyisela ukuhamba kwegazi ngemithambo enikezela amathumbu noma izinso. Le mithambo ihlanzwa emgudwini okwenziwe ngawo, ngaleyo ndlela ibuyisele ukugeleza kwegazi.
Ukuhlinzwa kwe-aorto-bifemoral bypass - ukudala indawo yokuhamba kwegazi ngokuhamba kwe-aorta noma imithambo ye-avaac. Kwenziwa ngokufakwa ngakwesobunxele kwenkaba nakuzo zombili izinkalo. I-Shunt - isikejana sokufakelwa sinamathiselwe engxenyeni edlulayo ye-aorta bese siyiswa emithanjeni yabesifazane emilenzeni yomibili. Lokhu kudala indlela yokufakelwa ukuthi igazi lidlule ekuqhekekeni futhi ukugeleza kwegazi emilenzeni kuyabuyiselwa. Izindleko eziphelele zomsebenzi ngaphandle kwezindleko ze-anesthesia zikhonjisiwe.
Isiphambano esidlula lapho sesifazane
Isigcabha sangaphansi sowesifazane isiphithiphithi esidlula kwesinye isithambeka sowesifazane sangasese (i-artery artery) siye emthanjeni olungemunye umlenze. Kwenziwa ngenhla kwe-pubis ngokwezifiso. Isimo esiyisisekelo sokuqedwa ngempumelelo kokusebenza okunjalo kuyindawo enhle yokuqothuka kwemithambo yomhlinzeki. Ukusebenza okunjalo akusebenzi kahle kunokwezibatha eziqondile, kepha kukuvumela ukuthi ulondoloze umlenze ezigulini ezibuthakathaka yizifo ezihlangene.
Ku-femoral distal popliteal edlula kokuxhunyelelwa
Ukwakha ukuhamba kwegazi ukugeleza kwe-blockage ye-artery femoral. Kwenziwa kusetshenziswa umthambo wesiguli uqobo, ocutshungulwa kusetshenziswa ubuchwepheshe obukhethekile ukudala amathuba okuhamba kwegazi kusuka phezulu kuya phansi. Lobu buchwepheshe lula ukungenelela futhi sithuthukisa imiphumela yaso.
IBypassite Popliteal Proximal Bypass
Ukwakha ukugeleza kwegazi okuhamba ngokweqile kwe-artery evikelekile yesifazane. Kwenziwe ukusikeka okubili emathangeni aphezulu nangaphansi. Umkhumbi okhethekile obunjiwe uthungelwe endaweni etholakalayo yomthambo wezinsikazi, obanjwa engxenyeni yesithathu yothanga, lapho uthungelwelwa khona umthambo oplopleal. Ngaleyo ndlela, ukuqina kwemithambo yethambo eliyinhloko emlenzeni kuyabuyiselwa.
Ukubuyekezwa kokuxilongwa kwemithambo yegazi
Ukuhlola ukuthi kungenzeka yini ukuhlinzwa kwemithambo yegazi noma ukuhlinzwa kwemithambo yegazi.
Uthango nokwakhiwa kokuxhunyelelwa kwe-autovenous (ngaphandle kwendawo yomlenze osetshenzisiwe) + izindleko zomsebenzi
Ukulungiselela ukushunqulwa kwemicrosuction emithanjeni yomlenze noma unyawo olungezansi. Kuqukethe ukuqoqwa kwemithambo ye-saphenous emlenzeni noma ekusebenzeni ukuze kwakhiwe i-auto shunt shunt efanele ukungenela kwemithambo yegazi.
Ukuvuselelwa kwemicrosological konyawo
Ukuhlinzwa ngakwadlula kwemithambo yonyawo ngaphansi kwesibonakhulu.
I-microsurgical fibular shunt
Ukusebenza kokujikijela emthanjeni we-fibular ongafinyeleleki ngaphansi kwesibonakhulu.
I-microsurgical tibial shunting ngaphakathi komlenze ophansi
I-Fibro-tibial idlula isebenzisa i-vein yakho njenge-shunt. Okushiwo ukusebenza ukwedlula ama-artery avinjelwe kusuka ethangeni kuya emlenzeni ongezansi. I-shunt ihunyiselwe emithanjeni yomlenze ephansi isebenzisa inqubo ye-microsuction ngaphansi kwesibonakhulu.
Ukuqunjelwa kabili kwe-microsuction tibial phakathi komlenze ophansi
Kuthungatha ngaphansi kwesibonakhulu semithambo emibili yomlenze ophansi. Kusetshenziswa esimweni esibi semithambo, lapho kukhona kuphela izingxenye ezimbalwa zomgwaqo ezingahambelani.
Ukuhlinzwa kwe-Microsurgical Tibioperoneal Bypass Surgery
Ukuhlinzwa kweBypass kusuka kumthambo wabesifazane kuya esiqwini se-tibioperoneal engxenyeni yesithathu ephezulu yomlenze.
I-endarterectomy evulekile noma engene ngaphakathi evulekile kanye nomthambo wepulasitiki ongaphansi kuka-10 cm
Umsebenzi wokususa i-atherosclerotic plaque kusuka kumthambo ukuze ubuyisele ubunikazi bomkhumbi. Kwenziwa njengokuhlinzwa okuzimele noma ekusebenzeni okuyinkimbinkimbi ukubuyisela ukuhamba kwegazi.
Ukuhlinzwa kusetshenziselwa ukuvimba umthambo we-iliac ongaphandle uma kungenakwenzeka ukwenza ukungenelela kwe-endovascular (angioplasty and stenting). Ukufinyelela kuyafana ne-aorta yesisu. Ukulimala esiswini kanye nasezinjeni.
Ukuhlinzwa ukuze kudlule ukugeleza kwegazi okudlula lapho kuvalwa imithambo ye-aorta nemithambo ye-iliac ezigulini ezine-ischemia esibucayi Kusetshenziswa ezigulini ezinzima zokuguga, ngokufakwa kokuqina kobuso obudala be-aorto-femoral. Ukusikeka ezimbili kufanele. Enye ngaphansi kwekholaji yokuhlukanisa i-axillary artery, enye ethangeni.
Umsebenzi wokubuyisela ubunikazi be-artery ejulile yabesifazane. Kusetshenziswa kwiziguli ezine-ischemia ebucayi, imvamisa zihlanganiswa nokuhlinzwa kwe-bypass.
I-profundoplasty ethuthukisiwe isebenzisa inqubo ye-microsuction
Umsebenzi wokubuyisa ubunikazi besithambo esijulile sowesifazane kanye namagatsha awo ezilondeni ezinzima ze-atherosrance.Kusetshenziswa imakroscope ukubuyisela amandla amagatsha amancane.
Ukudalwa kwe-shunt eyinhlanganisela (kusuka ezingxenyeni eziningana zemithambo ye-autologous esebenzisa i-veno-venous anastomoses noma i-Pical ye-PTFE ye-pein nge-vein) + izindleko zomsebenzi
Ukusebenza kokudala i-auto shunt shunt, lapho kungekho thambo elilungele ukugeleza. Izingxenye ezahlukahlukene zemithambo zithathwa futhi zixhunywe kushunthi eyodwa yobude obudingekayo.
Ukususwa kwe-aortic vascular prosthesis
Ukungenelela okunamandla ekufakweni kwe-prostatic ye-vascular, edinga, ngaphezu kokuqeda ukugxila kwe-purulent, ukubuyisela ukuhamba kwegazi.
Ukufinyelela kokuhlinzwa i-thoraco-abdominal aorta (thoracophrenolumbotomy)
Ukutholakala kwe-aaca yesisu ye-thoracic ne-adrenal. Isetshenziselwa ukusebenza kule minyango, noma ukuhlinzwa kwe-aorto-bifemoral bypass lapho kungenakwenzeka ukufinyelela i-subrenal aorta. Kukhokhwa ngokwahlukana ezindlekweni zomsebenzi.
Izindleko zokuhlinzwa kabusha okwenziwe ngeplastiki
Ukuqunjelwa kwe-Hip kwenziwa nge-gangrene, kusakazeka ngaphezu kwengxenye yesithathu yomlenze, uma kungenakwenzeka ukubuyisa ukujikeleza kwegazi emlenzeni. Kwesinye isikhathi lokhu kuhlinzwa kwenziwa ngokuphuthumayo kuma-ischemia asezingeni eliphansi lomlenze ngokufa kwayo yonke imisipha noma izifo ze-anaerobic ezine-sepsis.
Ukuhlinzwa ukususa umlenze ophansi nge-gangrene.
Ukunqunywa komunwe kungenziwa nge-necrosis (necrosis) kuphela ngemuva kokubuyiselwa kokujikeleza kwegazi. Ingaphela ngokuvalwa kwesiphunzi, uma ukujikeleza kwegazi kubuyiselwe ngokuphelele futhi kungabikho ukutheleleka, noma isiphunzi sihlala sivulekile futhi kancane kancane siziphilise.
Ukuqunjelwa kwethambo nepulasitiki
Ukuhlinzwa ukuze kususwe umlenze ophansi kanye nedolo kuhlangene ngenkathi kulondolozwa i-patella kanye nesiga esisekelayo. Isetshenziselwa i-gangrene yomlenze kanye nonyawo, nokugeleza kahle kwegazi ethangeni. Inzuzo ngaphezu kokuqunjelwa okuvamile kwe-hip isigaxa sokwesekela, esivame ukuxakaxaniswa nezilonda zokucindezela futhi sivumela ukusetshenziswa kwezinhlobo zesimanje zokuqubuka kwabaphethe i-vacuum.
Ukunqunywa kwe-Pirogov osteoplastic komlenze ophansi
Ukunqanyulwa komlenze ophansi ngokulondolozwa kwe-calcaneus nokudalwa kwesiqu esisekelayo. Kwaphakanyiswa emuva ngekhulu le-19. Inzuzo yikhono lokuhambahamba ngaphandle kwe-prosthesis. Ngama-prosthetics amahle inomphumela omuhle kakhulu wokusebenza.
Ukuphinda u-Shin, ukwakheka kwesiqu
Ukusebenza ukwakheka nokuvalwa kwesiqu somlenze ngemuva kwendlela yokuqunjelwa eziphuthumayo "ye-guillotine".
Ukususwa kwengxenye efile yonyawo ngokubumba noma ngaphandle kwesiqu. Isetshenziselwa i-gangrene ngemuva kokubuyiselwa kokuphuma kwegazi. Kubhekiswa ekunqunyweni okuncane.
Izindleko zokungenelela kwemithambo ye-endovascular
I-Angioplasty yemithambo yonyawo ne-plantar arch isebenzisa ukufinyelela kwe-retrograde
Isetshenziselwa ubunzima ngokuhamba kwemithambo yomlenze evalekile njengokufinyelela okunye. Kusetshenziswa ama-Microcatheters, ama-micro-Equipment kanye nenqubo ekhethekile yokungenelela.
I-Angioplasty yomthambo owodwa emlenzeni (kusetshenziswa ibhaluni eli-1)
I-Angioplasty kungukungenelela kokuqina okwenziwe nge-punct in artery. Ngemuva kokubhoboza, kufakwa ithuluzi elikhethekile ku-artery - i-intradusser, okuyi-catheter emfushane. Ngalo, kuqhubeka umsebenzi. Umqhubi okhethekile udlula emthanjeni ovalekile noma ocashile lapho kufakwa ibhaluni elikhethekile endaweni emincane. Ngokukhulisa leli bhaluni, ukuvulwa kwe-lumen ye-artery kanye nokubuyiselwa kokugeleza kwegazi kule ndawo kutholakala.
Ukufaka okuhlanganisiwe okunesihluku ku-iliac noma i-artery engaphezulu yabesifazane engaphezulu
Ukufakwa kwe-prostrate ekhethekile ye-intravascular ukukhubaza i-aneurysm yomkhumbi.
Ukuvuselelwa kabusha kwe-tibial artery occlusion isebenzisa i-catheter ekhethekile ukusekela
Ukusetshenziswa kwamasu ayinkimbinkimbi, izindlela ezingezona ezejwayelekile zokudlula kokuqubuka okungapheli kwemithambo yomlenze ophansi noma ithanga.
I-artery eyodwa ehlabayo
Kusebenzisa isisi esikhethekile se-stent ngesikhathi sokuhlinzwa ukuqinisa umthambo kusuka ngaphakathi, izindleko zestent ngokwayo ifakiwe ezindlekweni zensiza.
I-Stenting ye-popliteal noma i-artery ejwayelekile yabesifazane ene-Supera stent
Izigxobo ezijwayelekile azilungele ukugcotshwa endaweni yamajoyinti amakhulu. Ngenxa yokugoba okuvamisile, iziqu ezijwayelekile zingahle zihlehle futhi zinqamule. Phambilini, lezi zindawo bezithathwa njengezingenakufinyeleleka ngo-stenting, kepha konke kwashintsha lapho ama-Super stents avela ku-Abbot angeniswa emkhakheni. Umtholampilo wethu wawungomunye wokuqala ukufaka lezi zinhlaka eRussia, futhi ochwepheshe bethu baba ngabokuqala ukuthola isitifiketi esihambisanayo. I-Supera stents ibekezelela amakhulu ezinkulungwane zokugoba ngaphandle kokulahlekelwa umsebenzi kanye nesakhiwo sawo. Ukusetshenziswa kwalezi zigxobo kuvumela ukwandisa amathuba okuphathwa kwe-endovascular of the popliteal and tloaelehileng femoriors.
Izindleko ze-anesthesiology nokunakekelwa okujulile
I-anesthesia ngesikhathi sokusebenza
Izindleko zehora elilodwa zokuphathwa kokubulala izinzwa
20% wezindleko zokuthenga
I-Epidural anesthesia yokusebenza
I-Epidural anesthesia ifaka ukufakwa kwe-catheter emincane emgogodleni, lapho i-anesthetic yendawo igeleza khona. Ngenxa yalokhu, ukuzwela kobuhlungu kucishiwe ngaphansi kwesayithi lomjovo. I-catheter ingahlala endaweni yesifo isikhathi eside futhi isetshenziselwe ukuphathwa kobuhlungu be-postoperative. Izindleko ze-anesthesia ngehora ziyavezwa.
Izindleko zehora elilodwa le-anesthesia.
Izindleko ezilinganisiwe zamazinga okwelashwa
Ukwelashwa kwe-gangrene ngaphandle kokubuyiselwa kokugeleza kwegazi
Izindleko ezilinganisiwe zokwelapha i-gangrene ngaphandle kokubuyisa ukuphuma kwegazi
Ukwelashwa kwe-gangrene ngokubuyiselwa kokuphuma kwegazi
Izindleko ezilinganisiwe zokwelapha i-ischemia ebucayi nge-gangrene yeminwe yomuntu ngamunye.
Ukwelashwa kwendabuko ye-pathology of imithambo yemilenze ephansi
Izindleko ezilinganiswayo zohla lwezinsizakalo zokwelapha izilonda ze-atherosulinotic of artery limbels asezingeni eliphansi kusetshenziswa ukuhlinzwa kwe-endovascular.
I-atherosulinosis yemithambo yemikhawulo engezansi - izimbangela, ukuxilongwa nokwelashwa
Kuyini i-arteriosulinosis yemithambo yegazi
Ukubonakaliswa okuyinhloko kwalesi sifo
Izimiso Zokwelashwa Okugcina
Kusetshenziswa izindlela zabantu
I-atherosulinosis yemithambo yemikhawulo engezansi iyinhlangano yemithambo eyingozi yemithambo ekhula ikakhulu ekugugeni. Esigabeni sokuqala, lesi sifo asizibonakalisi izimpawu zesimo, ezimeni ezisezingeni eliphakeme, ukugawulwa kwezitho zomzimba kungadingeka ukuvimbela izinkinga ezinkulu.
Ukuhlolwa ngesikhathi ngezibonakaliso zokuqala ze-atherosulinosis yemithambo yemithambo kuzokuvumela udokotela ukuthi anikeze inkambo ephumelelayo yokwelashwa kwesiguli.
Imithambo engashintshiwe yanoma iyiphi ingxenye yomzimba inesibani esinikeza ukunyakaza okungahambisani igazi nokudla kwezicubu, ngokulandelana.
Ukuvalwa kwe-atherosclerotic kwemithambo eyinhloko yezinyawo kungumphumela wokuqongelela kwamafutha ezindongeni zangaphakathi. Ama-plaque okwakha aqala ukugcotshwa endaweni ye-interellular space, kuyisiko ukuchaza lesi sigaba sokuthuthukiswa kwe-pathology ngegama elithi "ibala lamafutha".
Izinguquko ezenzeka kulesisigaba zisengamiswa, kepha izinkundla ezinjengalezi zivame ukutholakala ngengozi lapho kuhlolwa imithambo yegazi.
Kancane kancane, ama-plaque atherosclerotic aba makhulu, futhi lokhu kuholela ekutheni ububanzi bezitsha buba buncane futhi, ngenxa yalokho, ukuphakelwa kwegazi ngokomzimba kuyaphazamiseka. Ukuntuleka komoya-mpilo kanye nezakhi zomzimba kubangela ukuncipha kokuqina kwemithambo ethintekile, ukukhubazeka kwabo okwandayo kanye nezinguquko kwezicubu eziseduze.
Kancane kancane, i-calcium iqoqana ngaphakathi kwe-plaque enamafutha, iba nzima. I-Atherocalcinosis iphazamisa kakhulu ukunikezwa kwegazi, ngenxa ye-hypoxia, izicubu ze-necrosis zenzeka. Kunobungozi bokwehlukaniswa okungenzeka kusukela ezingxenyeni zokugcina ze-thrombus plaque, ezingavala umthambo omkhulu futhi zibangele ushintsho olungaphenduki.
I-Stenosing atherosulinosis yemithambo yethambo elingaphansi ijwayelekile kakhulu ezigulini esezikhulile ezingaphezulu kweminyaka engama-60, kepha lesi sifo asitholakali kubantu abasha abangaphansi kweminyaka engama-40 ubudala. Abesilisa bagula cishe izikhathi eziyisishiyagalombili kunabesifazane, futhi ukubhema isikhathi eside kudlala indima ebalulekile ekunciphiseni imithambo yegazi nokufakwa kwe-plaque emithanjeni.
I-stenosing atherosclerosis yemithambo eyinhloko yamaphethelo aphansi kwenzeka ngaphansi kwethonya lezinto ezahlukahlukene ezivusa lesi sifo.
Amathuba okukhula kwe-pathology anda kubantu:
Ngokuqagela ifa. Ngokubambisana nezakhi zofuzo, kutholakala izici zokuqina kwe-lipid emzimbeni, amazinga e-hormonal, ukwakheka kwesakhiwo sodonga lwentuthuko, kanye nokucaciswa kokungazeleleki, okuthinta isilinganiso sokuthuthuka kwe-atherosclerosis.
Ngemikhuba emibi. I-Nikotine kagwayi inikezwe umphumela we-atherogenic, kodwa ngaphezu kwalokho, ukubhema kuholela ekujuleni kwemithambo yegazi, futhi yikho lokhu okuqinisa ukuhamba kwegazi futhi kubangele cholesterol embi ukuba ihlale emithanjeni yemithambo yegazi. I-Alcohol nezidakamizwa azilimazi umzimba, kanti futhi zishintsha ngokushesha ukusebenza okuvamile kodonga lwe-vascular. Ngakolunye uhlangothi ukusetshenziswa kotshwala obusezingeni eliphakeme ngamanani amancane kubhekwe njengokuvimbela ukufakwa kwamadokhumenti ngaphakathi kwezikejana.
Ngezifo ezihambelanayo. I-atherossteosis yamaphethelo aphansi inzima ku-mellitus yesifo sikashukela, iziguli ezinale fomu yokuxilonga i-cholesterol plaques ngokushesha okukhulu. Iqembu lengcuphe lifaka phakathi labo abanomlando omude we-hypertension ne-thyroid hypothyroidism.
Ngokungasebenzi kahle komzimba. I-Hypodynamia inomthelela ekuqineni kwegazi emikhawulweni ephansi, okungukuthi, izimo ezifanele zenzelwe ukubekwa kwe-cholesterol.
Ngokuhlala isikhathi eside ngokwasemoyeni noma ukucindezelwa okuphindaphindiwe.
Ngezinqubo zokuvuvukala emithanjeni emikhulu yemithambo.
Ubungozi bokuthi isifo sokuqina kwemithambo yenhliziyo sikhule ngeminyaka, futhi izici ezethusayo zisebenza emzimbeni womuntu, kuphakama amathuba okulimala kwemithambo.
Kuyaphawuleka ukuthi i-atherosulinosis yemithambo yemithambo ihlala iqala ukukhula ngemuva kokuqina kakhulu kwe-frostbite, ukulimala okungathi sína, ukuhlinzwa kwesisu.
Ngokubhekisisa impilo yakho, ngisho nezimpawu zokuqala ze-atherosclerosis yezingalo zingasolwa zodwa.
Kunconywa ukuba uhlolwe ngokufushane uma kwenziwa izinguquko ezilandelayo:
Ukulunywa nokukhamba emilenzeni. Imvamisa, iziguli zinquma ukufana kwezimpawu ezinjalo nalezo ezibonakala ngemuva kokuqunjelwa isikhathi eside kwesilungu. Kodwa imizwa engakhululekile emilenzeni ene-atherosclerosis yenzeka ngaphandle kwezizathu ezivumayo.
Ukudonswa kwamakhaza esiswini esithintekile. Lesi sibonakaliso siyabonakala ngezikhathi ezifudumele zonyaka.
Ukwehliswa kwamafutha omzimba nemisipha emilenzeni, okhalweni, ezinyaweni. Ukonakala kwezicubu kuhlotshaniswa nokuntuleka kwezakhi zomzimba nomoya-mpilo.
Ukucwilisa isikhumba, imifantu emilenzeni, ukucwazimula kwamazipho. Ngokuphikisana nesizinda se-atherosclerosis, izifo fungal zivame ukukhula.
Ukuncipha kwezinwele emilenzeni ngaphandle kokubuya kwezinwele okulandelayo. Lolu shintsho luhambisana nezinqubo zokuwohloka esikhunjeni.
Ubuhlungu Kuqala, imizwa ebuhlungu ivela ngesikhathi sokuzivocavoca komzimba, esigabeni sokuqala kuvela "ukushintshana kokushintshana". Ezimweni ezisezingeni eliphakeme, izinhlungu zingaphumula.
Ukuvela kokugqekeza okungekhona okungokwemvelo kwesikhumba sezinyawo nemilenze. Ukwenza ubumnyama kukhombisa i-thrombosis, futhi kuyi-harbinger ye-necrosis.
Izilonda zomlenze wesidududu, ezingapholi, zivame ukwakheka endaweni yezinyawo.
IGangrene. I-tissue necrosis yenzeka esigabeni sokugcina se-atherosclerosis, amafomu wokuxinana ngokushesha kubantu abanesifo sikashukela kanye nezinye izindlela ezithile ezihambisana nawo.
Lesi sifo sihlukaniswa ngokuya ngezinguquko emithanjeni nasezimpawu zesifo.
Kunezigaba ezi-4 ze-pathology:
Isigaba sokuqala siyingqayizivele. Kulesi sigaba, i-lipoidosis yenzeka - ushintsho oluphelele ekujuleni kwamafutha, oluboniswa ngokubonakala kwendawo yamafutha emithanjeni yemithambo yegazi. Ukuqina emilenzeni kwenzeka kuphela ngemuva kokuhamba amabanga amade noma ngemuva kokuzikhandla okukhulu ngokomzimba ngokugcizelela emilenzeni ephansi. Ngemuva kokuphumula, izinhlungu zihamba.
Esigabeni sesibili se-pathology, usizi emaphethelweni lubonakala ngemuva kokunqoba ibanga lamamitha angama-250-1000 ngezinyawo.
Esigabeni sesithathu, i-ischemia ifinyelela inani elibucayi. Ubuhlungu emilenzeni kwenzeka ngemuva kokuhlula amamitha angama-50-100.
Isigaba sesine isigaba sokubonakala kwezilonda kanye ne-necrosis ene-gangrene elandelayo elandelayo. Umuntu uzwa ubuhlungu obukhulu nokungakhululeki emilenzeni yakhe ngisho nasebusuku ngesikhathi sokuphumula.
Udokotela onolwazi angasola ukulimala kwemithambo yegazi engezansi esele lapho ehlola isiguli. Ukunakwa kukhokhwa kumbala wesikhumba, izicubu ze-atrophy, ukudonsa kwemithambo yegazi.
Ukuze uthole ukutholakala kwesifo esinembile, khetha:
I-Angiography. Le ndlela enembile kakhulu yokufunda izinguquko emithanjeni yegazi. Okokuqala, umenzeli ohlukile ufakwa emthanjeni wensikazi bese kuthathwa i-X-ray yelungu. I-Angiography ikuvumela ukuthi unqume zonke izindawo ze-vasoconstriction kanye nokuba khona kwenethiwekhi yokudlula yangaphandle. Njengoba le nqubo ihlasela, ayenziwa ngezifo zezinso ezenzeka kakhulu nokungabekezeleli i-iodine ephakathi.
I-Ultrasound Dopplerography - inqubo ikuvumela ukuthi ubone amasayithi anciphisa ku-95% wamacala.
Ukuhlolwa kwegazi ukuthola okuqukethwe kwe-cholesterol embi nesikhathi sokuhlangana kwegazi.
Ukuxilongwa kanye ne-degree ye-atherosclerotic lesion kwenziwa kuphela ngemuva kokuhlola yonke idatha yokuhlolwa. Ukwelashwa kukhethiwe ngokuya nge-pathologies ekhonjwayo.
Uma isiguli sinenhlanhla futhi i-pathology isungulwe esisekelweni sokuqala sentuthuko, khona-ke ukuvimba ezinye izinguquko futhi ziguqise ukuphazamiseka okukhona, kungadingeka kuphela ukukhipha umthelela wezinto ezivusayo emzimbeni.
Okokuqala, yeka ukubhema
Yidla ngendlela yokuthi amafutha amancane ezilwane njengomthombo we-cholesterol emibi engena emzimbeni,
Ukwehla kwesisindo uma kunamaphawundi angeziwe,
Vimbela ukwanda kwengcindezi yegazi ngaphezulu kwe-140 mm Hg. st
Qinisa imisebenzi yomzimba. Emithanjeni yemilenze, ukuhamba, ukuhamba ngebhayisikile, ukubhukuda kuyasiza, ungazivocavoca ngamabhayisekili ekhaya,
Ukwelapha izifo ezingamahlalakhona. Uma unesifo sikashukela, udinga njalo ukugcina izinga elijwayelekile likashukela egazini.
Ukwelashwa kwe-stenotic atherosulinosis yemithambo yemikhawulo ephansi esigabeni sesibili nesilandelanayo se-pathology ihlukaniswe ngokweziguli, okungahambisani nokuhlinzwa.
Izindlela zokwelashwa ezilandelanayo zihlanganisa ukuthatha imishanguzo kanye nePhysotherapy.Izifundo zokuthatha ezikhethwe ngokukhethekile ngokuya ngezinguquko ezembuliwe emithini zenzelwe izinyanga eziyi-1.5-2, zidinga ukuphindwa izikhathi eziphindwe kane ngonyaka.
Izidakamizwa ezisetshenziswa ikakhulu:
Ama-discgregants, okungukuthi, ama-ejenti avimba ukwakheka kwezigaba zegazi. Isiphikisi esidume kakhulu yi-aspirin.
Izidakamizwa ezithuthukisa izindawo zokuhamba kwegazi. Lezi zi-reopoliglyukin (ezilawulwa ngokuhlinzwa esibhedlela) kanye ne-pentoxifylline.
Ama-antispasmodics. Umphumela wale mishanguzo ukunciphisa i-vasoconstriction, ethuthukisa ukuhamba kwegazi.
Ama-anticoagulants anqunywa esigabeni sokubuyiselwa kwemali.
Inhloso yama-statins for the normalization of cholesterol egazini ayakhonjiswa. Kwi-atherossteosis, amalungiselelo ama-enzyme nawo asetshenziswa kaningi, ngoba lesi sifo ezimweni eziningi sihambisana nezinguquko kumanyikwe.
Eminye imishanguzo kufanele idakwe kanye, eminye isetshenziswe ngezikhathi ezithile, kwezinye izimo imithi izodinga ukuphuzwa impilo yonke. Izici zokukhethwa kwerejimeni yokwelashwa incike esigabeni se-pathology kanye nezifo ezihambisanayo.
Izindlela zokwelapha ezintsha zeziguli ezine-atherosulinosis yemikhawulo ephansi - i-balloon dilatation, i-angioplasty, ukuqina kwemithambo ethintekile. Lezi zinqubo ezihlasela kancane zivuselela ukuhamba kwegazi ngaphandle kokuhlinzwa kakhulu.
Kwenziwa kusetshenziswa imishini ekhethekile, isikhathi sokuvuselelwa kuthatha isikhathi esincane futhi isiguli singalulama ekhaya.
Amasu ahlaselayo okungenani angahle asetshenziswe njalo. Uma izingxenye ezivaliwe zemithambo zinde, lapho-ke kuyadingeka ukungena nokuhlinzwa ukuze kubuyiswe ukuhamba kwegazi. Isiguli sinikezwa enye yezinhlobo zokuhlinzwa:
Ama-Prosthetics engxenye eshintshiwe yomkhumbi ngezinto zokwenziwa.
Ukuhlinzwa kweBypass kudalwa kwesiteshi sokufakelwa esizovumela ukujikeleza kwegazi kwegazi njengoba kudingeka.
I-Thrombendarterectomy - ukusika ama-atherosselotic plaque emikhunjini.
Ezimweni lapho kutholakala khona i-gangrene futhi kungekho mibandela yokubuyiselwa kokujikeleza kwegazi, kudingeka ukunqunywa komlenze nesibindi. Lokhu kusebenza kubekiwe ukuze kusindiswe impilo yesiguli.
Imiyalelo evela emithini yendabuko ayisebenzi nge-atherossteosis, uma ungasebenzisi imishanguzo ebekwe udokotela wakho. Kodwa ama-decoction ahlukahlukene amakhambi, amabhafu akhethekile, ama-tinctures asiza ukuthuthukisa isimo semithambo yegazi nokwakheka kwegazi, futhi athuthukise ukumelana okujwayelekile komzimba.
Ama-Decoctions of chestnut wamahhashi, hops ojwayelekile. Lawa makhambi akhulisa ukuhamba kwegazi.
Ukugeza nge-Nettle. Ukusetshenziswa kwabo kuthuthukisa i-microcirculation futhi kusiza ukunciphisa ukungaphatheki kahle ngesikhathi sokuqina kwezinzwa.
Umuthi wegallic. Ama-clove ayi-10 kagalikhi adinga ukuthathwa, aphulwe bese athulule ingilazi yamafutha yemifino angachaziwe. Ingxube kufanele ifakwe usuku, ngemuva kwalokho ingelashwa. Ukwelashwa, ithisipuni lamafutha egalikhi lihlanganiswa nesipuni sejusi kalamula esisanda kufakwa, phuza lesi sidakamizwa kathathu ngosuku.
Qiniseka ukuthi ulandela ukudla. Kunconywa ukudla imifino nezithelo eziningi, ngamagilebhisi e-atherossteosis, ikhabe, i-viburnum, amantongomane, ushizi nezinhlanzi ezinamafutha. Kumele kukhunjulwe ngaso sonke isikhathi ukuthi ukusetshenziswa kwebhotela, inyama enamafutha, amasoseji, i-pastes, i-offal, i-muffin, imayonnaise enamafutha ene-atherosclerosis kufanele icishe iqedwe ngokuphelele.
Ukuhambisana nokudla ngeke kubuyise kuphela ukuqina kwe-elasticity emikhunjini, kepha futhi kuzosithinta kahle isimo somzimba wonke. Udinga ukuphuza okuningi, kuyasiza ukusebenzisa amanzi amsulwa, izithelo ezidliwayo, itiye eliluhlaza noma itiye elinolamula, ama-decoctions weminye amakhambi.
Izinzuzo zohlelo lokusebenza lwebhaluni
Ukuhlinzwa kwe-balloon ukuhlinzwa kwepulasitiki kunohlu lonke lwezinzuzo, okukuvumela ukuthi kusetshenziselwe ukwelashwa ezimweni eziningi zokungenelela kokuhlinzwa.
Ukwelashwa ngokuhlinzwa kwenziwa ngaphandle kokulimaza okukhulu kwesikhumba.
Ukuze wenze inqubo, ukubhoboza okuncane kwenziwa esikhunjeni. Esigabeni, kufakwa idivaysi ekhethekile okwenziwa kuyo ukufakwa kwamathuluzi, kanye nokwenziwa okukhohlisayo okudingekayo.
Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwe-balloon angioplasty kunikeza izinzuzo ezilandelayo:
i-anesthesia ejwayelekile ayidingeki, i-anyphesia noma i-anesthesia yendawo iyasetshenziswa,
ukungaphatheki kahle kwesiguli akudingekile, isiguli singasukuma sihambahamba usuku ngemuva kwenqubo,
ubunzima obuncane uma kuqhathaniswa nenqubo evulekile,
inqubo ithatha isikhathi esincane, uma kuqhathaniswa nezinye izindlela,
Ngaphezu kwalokho, nge-revascularization, ingozi yokutheleleka kwesibili incane.
Ukwethulwa kwebhaluni ku-lumen yomkhumbi kuvimbela ukukhula kwenqubo yokuvuvukala futhi kumise ukukhula kwe-endological ye-endothelium odongeni lwe-vascular.
Imiphumela Yepulasitiki ye-Balloon
Ukuthuthuka okujwayelekile kokugeleza kwegazi ngomkhumbi osetshenziswayo ngemuva kokuhlinzwa kwepulasitiki emithanjeni kugcinwa iminyaka emihlanu esigabeni esikhulu seziguli.
Imininingwane etholakele ngesikhathi sokuhlolwa kweziguli inika amandla udokotela ohambelayo ukubhalisa izibonakaliso zokuqala zokwehla kwesimo sezempilo futhi, uma kunesidingo, enze ukulungiswa kwaso.
Ukuqapha isimo sezempilo, isiguli sinconywa okungenani kabili ngonyaka ukuba sihlolwe umzimba usebenzisa i-dopplerography ye-ultrasound kanye kanye ngonyaka ukwenza ukuhlolwa nge-computer tomography.
Uma isiguli sibhekwa ngokomtholampilo futhi silungiswa ngesikhathi esifanele sesimo sakhe sezempilo ngokuvezwa kwezidakamizwa zokwelapha, umsebenzi wokuhamba wesiguli ugcinwa kuso sonke isikhathi sokuphila.
Imiphumela etholwe kusetshenziswa i-balloon angioplasty noma i-stenting emithanjeni yabesifazane iyaqhathaniswa nemiphumela etholwe ngokuvimba ingxenye yesitho sangasese sowesifazane wesistimu ye-vascular isebenzisa i-prosthesis yomkhumbi wokufakelwa.
Ngokwezibalo zezokwelapha, kuma-80% eziguli ezisebenza ngokuhlinzwa ngopulasitiki, ubunikazi besibhede sezinzwa bugcinwa okungenani iminyaka emithathu. Uma isiguli sizibandakanye njalo ekuhambeni okwelashwa, khona-ke isidingo sokusebenza kabusha asiveli.
Ukuhlinzwa ngopulasitiki kususa ingozi yezicubu ze-necrotization nezinkinga. Le ndlela ivimbela ukuthuthukiswa kwezinkinga zezigelekeqe.
Ukusetshenziswa kokuhlinzwa kwe-aortic femoral bypass
Izinkomba eziphambili zokuhlinzwa kwe-aortic-femoral bypass ukuhlinzwa kwe-occlusion embhedeni we-aorta wesisu ngokuqala nokwanda kokuntuleka kwe-aortic.
Ngaphezu kwalokho, le ndlela isetshenziselwa ukuthola ukuqothuka kombhede we-vascular echibini le-aral echibini, inqobo nje uma kungenakwenzeka ukwenza ukuhlinzwa kwepulasitiki okungapheli.
Futhi, le ndlela iboniswa isetshenziswa ekuboneni i-aneurysms yodonga lwe-aortic lwesisu.
Ukuhlinzwa kwe-aorto-femoral bypass njengamanje kuyindlela evamile kakhulu futhi ebabazekayo yokuvimbela ukuthuthukiswa kwezinhlobo ezinzima zesifo se-coronary kanye nokuqunjelwa amalunga kushukela.
Ngokuhambisana nezibalo zamanje zezokwelapha, ukulahleka kwemilenze phakathi kweziguli ezinesilonda sohlelo lwe-vascularalunga lezinyawo cishe kungama-20% azo zonke izimo ze-pathological ezibhalisiwe.
Ngokungenelela okwenziwe kahle kwi-aorta yesisu, ubungozi bezinkinga eziholela ekunqanyweni kwamalungu ancishisiwe kube inani ku-3% yamacala.
Izincazelo zokungenelela kokuhlinzwa kokuhlinzwa kwe-atherosulinosis yemikhumbi emaphethelweni aphansi kuncishiswa ekwabiweni kwengxenye ye-aorta ebekwe ngaphezu kwendawo ethintekile yi-cholesterol deposits.
Ngesikhathi senqubo, i-incision yenziwa endaweni engemuva yesisu kanye nengxenye engenhla yesifunda sowesifazane. Ngemuva kwalokhu, kukhethwa isigaba se-aorta lapho kungatholwa khona ama-atherosulinotic amana. Kule ndawo, umkhumbi wokufakelwa uvuthelwa ku-aorta. Izinto ezisetshenziswayo ekwakhiweni komkhumbi azithathi hlangothi ngokwemvelo futhi azivusi ukuphendula kokuzivikela komzimba. Ukuphela kwamahhala komkhumbi wokufakelwa okulethwa kulethwa ezingxenyeni ezikhululiwe zemithambo yensimbi yabesifazane futhi kwaqondiswa kubo.
Ukuthungatha kungaba yimbumba eyodwa noma eyodwa.
I-Arterial artery bypass grafting inqubo eyinkimbinkimbi. Lokhu kungenxa yokuthi izindonga ze-aorta zivame ukuba nezinguquko eziqinile, ezingavusa ukubukeka kokuphuma kwegazi ngesikhathi senqubo.
Ukubuyisela ukuphakelwa kwegazi kuyindlela kuphela yokugcina isilungu esigulini sihlushwa uhlobo olunamandla lokuqothula i-atherosclerosis.
Ngemuva kwenqubo, ezimweni ezingavamile, ukuthuthukiswa kwengqungquthela enjalo njengokuvuselelwa kwe-prosthesis kungenzeka. Yini engadala ukubonakala kokopha.
Ukuhlinzwa kweBypass kanye ne-angioplasty kungukungenelela okuphezulu kobuchwepheshe; izindleko zokwelashwa okunjalo ziyisilinganiso esikhulu, esingahluka kusukela ekuxakaneni kwenqubo nendawo yokungenelela kokuhlinzwa.
Ungayelapha kanjani i-atherosclerosis yemilenze uzotshela uchwepheshe kule vidiyo ekulesi sihloko.
Ukugcotshwa kwemikhumbi yemikhawulo engezansi - izinkomba, ukulungiselela kanye nokwenza
Ukujikeleza kwegazi emilenzeni kuyaphazamiseka ngenxa yezizathu ezahlukahlukene, ikakhulukazi ngenxa yokwakheka kwezigcawu ze-atherosclerotic emikhunjini. Ukwelashwa okwehlisayo kugcwele imiphumela emibi, kuze kube ukunqunywa. Uma ukwelashwa kwezidakamizwa kungasebenzi ngokwanele, odokotela batusa inqubo engahlaseli ezigulini - ukufakwa kwemikhumbi yemikhawulo ephansi.
Umsebenzi wokufaka i-stent ubandakanya ukwethulwa kwensiza yokunwebeka elawula ukukhanya kwemvelo komkhumbi.
Enye yezindlela ezivame kakhulu zamaphethelo aphansi i-atherosulinotic lesion.
Lapho kuvela i-atherossteosis, ukuvela komgudu wegazi kuncishisiwe, okungukuthi, i-stenosis yenzeka (i-lumen yabo iyancipha). Ngenxa yezinkinga zokujikeleza, umuntu ubhekene nokubonakaliswa okungathandeki.
Uma isiguli singenzi lutho, lesi sifo sizoholela ku-necrosis yezicubu kanye nobuthi begazi.
Ukujikeleza kwegazi emilenzeni kulimale kakhulu kushukela, okuvezwa ngokubonakala kwezilonda ebusweni besikhumba. Uma ukwakheka kwezilonda kungalashwa ngesikhathi, isiguli sizoncipha umlenze.
Noma ibuphi ubuhlungu emilenzeni kufanele bube yisizathu sokufaka isicelo sokuhlolwa. Ngenkathi lesi sifo sisesigabeni sokuqala, kuzokwazi ukubhekana naso ngokwelashwa kwezidakamizwa.
Izinkomba zokufaka izindebe zemithambo yemikhawulo engezansi zingokulandelayo:
ushintsho lwe-trophic (izilonda, amanxeba),
izitho ezingasebenzi kahle.
Kukhona ukuphikisana kokuklanywa:
ububanzi bomkhumbi othintekile mncane kakhulu (imikhumbi enobubanzi okungenani obuyi-2,5 mm ilungele ukunuka),
phazamisa i-stenosis (lapho kuthinteka kakhulu umkhumbi),
ukwehluleka ukuphefumula kanye nezinso,
ukuzwela okweqile kwe-iodine (into esetshenziselwa ukuqhathanisa).
Ukungenelela okufika ngesikhathi kuzogwema ukunqunywa.
Ukujikijela kwemikhawulo engezansi kwenzeka ngezigaba eziningana:
I-anesthesia yendawo isetshenziswa endaweni lapho kuhlelwa khona ukuthungwa komkhumbi.
Imvamisa, ukufakwa kwamakhala kwemithambo yesitho sowesifazane kwenziwa.
Ngemuva kokukhunjulwa komkhumbi, kufakwa i-catheter ekhethekile, enamabhaluni ekugcineni. Udokotela ohlinzayo uhola i-catheter emgudwini wemithambo yegazi endaweni lapho kunokunqunyelwa okubucayi. Ngenxa yokunyuka kwebhaluni, ukukhanya kwe-artery kuyabuyiselwa.
Kusetshenziswa enye i-catheter, ngosizo okuthi kuyo isitofu sicindezelwe endaweni ethintekile. Ngemuva kwalokho, uzolulama, alungiselele odongeni lomkhumbi. I-stent inokuvela kweshubhu lezinto ezinemithombo.
Udokotela ubheka okwenzekayo ngosizo lwe-x-ray imaging.
Esigabeni sokugcina, zonke izinto ezifakiwe ziyatholakala kabusha ngaphandle kwesiqu. Ukuvimbela ukuphuma kwegazi, umgodi ugoqwe imizuzu eyi-10 kuye kweli-15.
Kubalulekile! Uma isigaba esonakele side kakhulu, kufakwa imicu eminingana ngesikhathi sokusebenza.
I-Stenting ayinakwenziwa hhayi kwi-artery yabesifazane kuphela. Ezimweni eziningi, izilonda ze-atherosclerotic zithinta imikhumbi ye-popliteal.
Ukujikijela kwemithambo yemilenze, kuye ngezinga lesifo, kuthatha ihora kuya kwethathu, kanti isiguli asizizwa siphi isimo esibuhlungu. Ngenxa yokubulala izinzwa kwasendaweni, umuntu angazisa odokotela ngemizwa yabo.
Izinhlobo ezahlukahlukene zezinti zisetshenziselwa ukwengeza i-vasel lumen. Imikhiqizo yile:
ngenhlanganisela ekhethekile ekhipha umuthi kancane kancane iye egazini.
Izinzuzo zokukhipha izisu zifaka lokhu okulandelayo:
Okuhlaselayo okuncane. Uma kuqhathaniswa nezinye izindlela zokuhlinzwa, lapho kudingeka khona ukwenza indawo ethile endaweni ethile, ngesikhathi sokukhipha umunyu, kuyadingeka kuphela ukubhoboza imbala ukufaka kamuva i-catheter.
I-anesthesia yendawo isusa izingozi ezihambisana ne-anesthesia ejwayelekile, ebaluleke kakhulu kubantu asebekhulile.
Isikhathi sokuthola kabusha. Ngemuva kokuhlinzwa, isiguli sivame ukuphuma esibhedlela ngakusasa.
Ithuba elincane lezinkinga.
Ngaphambi kokufafaza imithambo yemikhawulo engezansi, isiguli kufanele silungiselele ngendlela ethile. Uma kunezinkomba zokwelashwa okuhlinzwa, uthunyelwa ukuba abhekane:
Ukuhlaziywa okujwayelekile komchamo negazi,
ukuhlolwa kwegazi kwe-biochemical,
I-dopplerography ye-Ultra yemikhumbi yemikhawulo engezansi,
i-angiography kanye nezinye izifundo.
Kuyenqatshelwa ukudla ukudla kanye noketshezi okungenani amahora ayi-12 ngaphambi kokuhlinzwa. Isonto lonke, udokotela uguqula umuthi, futhi izinsuku ezimbili kuya kwezintathu, unquma ama-antiplatelet agents.
Izinkinga ngemuva kokuhlinzwa
Noma yikuphi ukungenelela kokuhlinzwa, izinkinga azikhishwa. Ukuqina kungaholela ku:
ukuguqulwa kodonga lwe-vascular noma ukugqabuka kwalo,
ukwakheka kwama-hematomas noma isimila endaweni yokubhoboza,
restenosis (ukuphindaphindwa okwandayo kwe-lumen),
Imiphumela efakwe kuhlu ayivelakancane.
Odokotela baxwayisa ngokuthi ukufaka i-stent ngeke kuselaphe lesi sifo. Ukuhlinzwa kusiza ukuqeda umphumela kuphela. Esikhathini sokusebenza, uzodinga ukunaka impilo yakho njalo.
Ukuphathwa njalo kwezidakamizwa ezinomphumela we-antiplatelet. Imvamisa, imishanguzo kufanele idakwe okungenani izinyanga ezintathu ngemuva kokuhlinzwa. Imithamo nobude besifundo babelwe ngawodwana.
Ukuhambisana nokudla okwehlisa i-lipid.Isiguli kufanele sidle ukudla okwehlisa i-cholesterol.
Ukuqapha njalo kwengcindezi yegazi. Uma izinombolo ziphakeme kakhulu, kuzodingeka ukuthi ushintshe indlela yakho yokuphila. Udokotela wakho angakunikeza imishanguzo yokudambisa ingcindezi. Qiniseka ukuthi unciphisa ukungenisa usawoti.
Ukuqedwa okukhulu kwezinto ezibangela ukuthuthukiswa kwe-atherossteosis. Kuyadingeka ukwenza isisindo sakho sibe ngokwejwayelekile
Izindleko zokuhlinzwa zithonywa izici eziningi. I-Stenting yenziwa kusetshenziswa imishini ebizayo. Yonke imikhohlisi edingekayo yenziwa ngochwepheshe abafanelekayo. Ngaphezu kwalokho, intengo incike kokuthile okusetshenzisiwe. I-stent ehlanganiswe nento yomuthi ibiza kakhulu. I-stent ejwayelekile ibiza kusuka kuma-ruble ayizinkulungwane ezingama-50.
Emitholampilo ehlukene ukwelashwa okunjalo kunentengo yayo. Izinga lobunzima besifo kanye nenani lemikhumbi edinga ukuhlinzwa kuyabhekwa. Ngokuvamile, ukuhlinzwa usebenzisa izinti kubiza iziguli okungenani ama-ruble ayizinkulungwane ezingama-80.
Akufanele ugcine impilo yakho, ikakhulukazi njengoba ukuhlinzwa kusiza iningi leziguli ukuba zibuyele endleleni ejwayelekile. Imiphumela yokuphazamiseka kokuphuma kwegazi ingaba yingozi impela. Kunezimo lapho, ngenxa yomonakalo emikhawulweni ephansi, isiguli siyafa. Ukusebenza kahle kwamazinyo kuqinisekisa izindleko zawo.
Ngenxa yokuqina, iziguli zingasusa ukungathandeki emilenzeni. Kodwa-ke, ngaphandle kokubheka zonke izincomo zikadokotela ngesikhathi sokuvuselelwa, ukuphindaphindwa kwe-stenosis yemikhumbi kungenzeka. Uma uqaphela ngesikhathi ushintsho olubi enhlalakahleni futhi uphendukela kochwepheshe, kuzokwazi ukuvimbela izinkinga ezingaba khona.
Ukuthuthumela kwemithambo yemilenze: izinkomba, indlela yokuziphatha, umphumela, ukuvuselelwa, ukuqwashisa ngesifo
Ukuthuthumela kwemithambo yemikhawulo engezansi kungukungenelela kokuhlinzwa okukuvumela ukuba ubuyisele ukugeleza kwegazi okujwayelekile emilenzeni. Kuqukethe ukudala i-detour (shunt) engafaki indawo ethintekile evela egazini.
Ngokuvamile kwenziwa emithanjeni yemikhawulo engezansi, kepha kwezinye izimo, ukungenelela emithanjeni nakho kuyakhonjiswa.
Ukuhlinzwa kwenziwa kuphela ngodokotela abaqeqeshiwe abaqeqeshiwe nabanolwazi emitholampilo ekhethekile ngemuva kokuba iziguli sezihlolwe ngokuphelele, futhi kwaqinisekiswa isidingo senqubo enjalo.
Ama-Shunts asetshenzisiwe anezinhlobo ezimbili: eziphilayo kanye nemishini:
Ama-shunts asemvelo noma emvelo enziwa kusuka kwinto ezenzakalelayo - izicubu zomzimba wakho. Lezi yizicubu eziqinile ezingagcina ukuhamba kwegazi kwe-arterial endaweni encane. Izicubu zomzimba womdabu zisetshenziswa kabanzi. Odokotela abahlinzayo bakhetha ubuhlakani obuvela kumthambo we-femhenous femoral, umthambo wangaphakathi we-thoracic, umthambo wemisebe engaphambili. Uma indawo ye-lesion inkulu kakhulu, futhi isimo sodonga lwe-vascular alwanelisi, kufakwa izigqila zokufakelwa zokwenziwa.
Ama-shunts we-mehendi noma okwenziwe ngawo ayenziwa kusuka kuma-polymers. Izindwangu zamaphimbo ezivumelanayo ziyasetshenziswa lapho kuvimbeka imithambo emikhulu ngaphansi kwengcindezi evela emfuleni wegazi onamandla.
Kukhona iziqobelo zezindaba eziningi ezisetshenziswa lapho kukhona imithambo ene-patency engasebenzi kahle ebangeni elide. Ama-anastomoses amafushane adlala indima yokudlala amabhuloho nezindawo ezinempilo.
Ukulimazeka emikhunjini yamaphethelo aphansi kubhekwa kaningi kunokwamanye ama-peripheral. I-shunting inqunyelwe iziguli uma ungekho umphumela wokwelapha ophuma ekwelashweni okulondoloziwe. Ukwakheka nemisebenzi yemikhumbi yemilenze kushintsha ngendlela efanele nge-aneurysm, i-arteritis, imithambo ye-varicose, isifo sokuqina kwemithambo yegazi.
izikejana ezedlula zonke zemikhawulo ephansi
Imithambo ye-arterial enempilo enendawo ebushelelezi iyathinteka, izindonga zazo ziba lukhuni futhi zithambile, zibunjiwe, zimbozwe ngamatshe e-cholesterol, ahlanganiswe izingcezu zegazi ezakhekile, ezinqamula i-lumen futhi zibangele ukuhamba kwegazi okulimazayo.
Uma ukuvimbela kokugeleza kwegazi kukhulu, kubuhlungu obuhlala isikhathi eside kwizicubu zamathole, ukuhamba kwamalunga kuyancipha. Iziguli zidinwa ngokushesha lapho zihamba, zivame ukuma zilinde ukuba kudlule izinhlungu.
Ukuguquguquka okuqhubekayo kwemikhumbi nokugcwala okuphelele kwe-lumen yazo kuholela ekuphulweni kokuhlinzekwa kwegazi kwezicubu, ukuthuthukiswa kwe-ischemia necrosis. Uma kungekho umphumela olindelekile wokulashwa kwezidakamizwa, baqala ukuhlinza.
ukuphazamiseka kwegazi okonweni kwezicubu nokukhula kwe-gangrene
Ukulimala emithanjeni, nakho, kubonakaliswa buthakathaka odongeni lwe-venous, ukuhlukunyezwa kwemithambo, ukunwetshwa kwabo, ukwakheka kwezigaba zegazi, ukuthuthukiswa kwezifo eziyingozi. Ngobungozi bezinkinga ezinzima, iziguli nazo zingakhonjiswa ukwethuka.
Ukuhlinzwa kwe-Vascular bypass okwamanje kwenziwa ikakhulukazi kulabo abaguli abahlinzwa udokotela wobuchopho. I-shunt inamathele esitsheni ngesinye isiphetho ngaphezu kwesayithi lesion, kanti elinye ngezansi.
Lokhu kwakha indawo yokusebenza endaweni ezungeze imithambo yegazi ethintwe yilesi sifo.
Ngenxa yokungenelela kokuhlinzwa, kungenzeka ukubuyisela ngokuphelele ukuphuma kwegazi, ukugwema ukuthuthukiswa kwe-gangrene kanye nokuqunjelwa umlenze.
Ukudonswa kwemikhawulo ephansi inqubo enzima okumele yenziwe ngokuya izinkomba eziqinile. Ukusebenza kwenziwa ngama-angiosurgeons ezimweni ezilandelayo:
I-peripheral artery aneurysm,
I-Atherosulinotic lesion of artery,
Ukuqala kokuqina kwemilenze,
Ukwehluleka ukusebenzisa amasu endovascular and okunye,
Ukuntuleka komphumela wokwelashwa ngezidakamizwa.
Ukuhlinzwa kwe-vascular bypass ngokuvamile akwenziwa uma:
Amathuba we-angioplasty ophumelelayo
Isimo jikelele sesiguli esingagculisi,
Izifo zezitho zangaphakathi esigabeni sokubuyiselwa kwemali.
Ukuthungatha imithambo yemilenze kungukusebenza okuyinkimbinkimbi okudinga ukuthi lowo ohlinzayo abe uchwepheshe futhi abe nesipiliyoni somsebenzi. Ukuhlinzwa kwenziwa ngaphansi kwe-anesthesia ejwayelekile noma yasendaweni, ngenxa yezimo zezokwelapha kanye nesimo esivamile seziguli. I-Epidural anesthesia ibhekwa njengendlela yesimanje yokuhlaziywa kwe-analgesia, enciphisa kakhulu ingozi yokusebenza.
Ukuhlinzwa kweBypass kwenziwa uma imithambo yemithambo ye-arterial kanye ne-venous ikhubazekile, uma ukuphazamiseka kwabo kungaphezulu kwama-50% ubukhulu. Ngesikhathi sokuhlinzwa, i-workaround idalwa kusetshenziswa ukufakelwa kusuka ekuqaleni kwesithiyo kuze kube sekupheleni kwayo. Ukuhlinzwa okwenziwe kahle kuqinisekisa ukubuyiselwa kokuphuma kwegazi emithanjeni ethintekile.
Feza ungqimba lwesikhumba ngesikhumba kanye nezicubu ezingaphansi nangaphansi kwendawo ethintekile.
Umkhumbi uhlala wedwa, uyahlolwa futhi ukufaneleka kwawo kokuwohloka okuzayo kunqunywa.
Umkhumbi wenziwa ngaphansi kwesikhwanyana, kuvulwe ishuthi, bese iqondiswa phezulu.
Bheka ubuqotho bokufakelwa.
Ngemuva kokuhlola isimo sokuphuma kwegazi nokugeleza kwe-artery, izicubu ezijulile nesikhumba ziyahlungwa.
Kunezindlela eziningi zokuhlinzwa ezidlula lapho. Ukuzikhethela ngakunye kunqunywa ukwenziwa kwendawo ethintekile. Ngokushesha emva kokuhlinzwa, isiguli sifakwa imaski yomoya-mpilo futhi izinzwa zibulawa ngokuhlinzwa.
Izinsuku ezimbili zokuqala ngemuva kokuhlinzwa, iziguli zikhonjiswa ukuphumula kombhede. Ngemuva kwalokho iziguli zivunyelwe ukuhambahamba ngasekamelweni nasephaseji. Izingcindezi ezibandayo ezibanjiswa imizuzu engama-20 zizosiza ukudambisa izinhlungu futhi kunciphise ukuvuvukala kwezicubu ezilimele ngosuku lokuqala.
Zonke iziguli ziyelulekwa ukuthi zigqoke amasokisi acindezelwe namasokisi ukuvimbela i-thrombosis. Ukwenza ngcono ukusebenza kwamaphaphu, kufanele kusetshenziswe i-spirometer evuselelayo. Zonke izinsuku, odokotela bahlola ukuthi kungenzeka yini ukuthi umuntu atheleleke ngaleli gciwane.
Ezinsukwini eziyi-10 ngemuva kokuhlinzwa, ochwepheshe bahlola ukuqashwa kwesiguli, bahlola izinkomba zemisebenzi ebalulekile yomzimba.
Ukuhlinzwa kwe-vascular bypass akususi isici se-etiological of the pathology, kepha kusiza inkambo yayo kanye nesimo seziguli. Ukwelashwa okugcwele kwesifo esiyisisekelo akuhlanganisi kuphela ukuhlinzwa, kepha futhi nokushintsha kwendlela yokuphila okuthikameza ukuthuthuka okuqhubekayo kwenqubo ye-pathological.
Umzimba wesiguli ubuyiselwa ngokushesha ngemuva kokuhlinzwa. Ngosuku lwesikhombisa, odokotela abahlinzayo basusa imithungo, bahlole isimo esigcwele sesiguli bese bemkhipha esibhedlela izinsuku eziyi-10-14.
Imithetho okumele ilandelwe esikhathini sokusebenza:
Landela ukudla futhi ungadli ukudla okuqukethe i-cholesterol futhi okunomthelela ekuzuzeni isisindo.
Thatha imithi evikela i-thrombosis ne-cholesterol ephansi yegazi.
Sebenza nodokotela ophilisayo.
Hamba nsuku zonke ibanga elikhulayo.
Lungisa isikhundla esiphakamile somlenze lapho ulele.
Yenza ukwelashwa okuhlanzayo kwamanxeba we-postoperative.
Yenza izivivinyo ezilula zomzimba ezithuthukisa ukuhamba kwegazi emilenzeni.
Yenza ngokwejwayelekile isisindo somzimba.
Thatha ukuhlolwa kwegazi ngezikhathi ezithile ukuthola amaplatelet kanye ne-cholesterol.
Yekani ukubhema notshwala.
Landela izincomo zama-angiosurgeons.
Uma kuvela izinkinga endaweni yokuhlinzwa, thintana nodokotela ngokushesha.
Ezigulini, inani nosayizi wokusikeka emilenzeni kuncike kwinani lama-shunts kanye nobungako besilonda. Ngemuva kokuhlinzwa emalungeni emaqakaleni, ukuvuvukala kuvame ukwenzeka. Iziguli zizwa umuzwa ovuthayo ongathandeki ezindaweni zokukhishwa kwe-vein. Lo muzwa uba nzima kakhulu esikhundleni sokuma nasebusuku.
Ngemuva kokuhlinzwa kwe-vascular bypass, ukubuyiselwa kokusebenza kwemilenze kwenzeka kungakapheli izinyanga ezimbili, futhi isimo esivamile sesiguli sithuthuka cishe ngokushesha: izinhlungu emlenzeni ziyancipha noma ziyanyamalala, futhi umsebenzi wayo wezimoto uyaqhubeka kancane kancane. Ukusheshisa le nqubo futhi kubuyiselwe amandla emisipha, isiguli kufanele senze umzamo futhi sizithuthukise.
Isikhathi sempilo ephelele ngemuva kokuhlinzwa kwe-vascular bypass siyehluka futhi kuya ngeminyaka yesiguli, ubulili, ukuba khona kwemikhuba emibi nezifo ezihlobene, ukuthobela izincomo zikadokotela.
Imvamisa, iziguli ezihlinzwa zihlushwa uhlobo olunzima lwe-atherosulinosis yemithambo yegazi. Ezimweni eziningi, ukufa kwenzeka nge-myocardial ischemia noma izicubu zobuchopho (ukushaya kwenhliziyo, unhlangothi).
Uma ukugawulwa kwemithambo yemilenze kungaphumeleli, isiguli sisongelwa ngokunqunywa umlenze kanye nokufa phakathi kokungasebenzi komzimba.
Ukugwema kuvame ukusebenza ngokujwayelekile iminyaka emi-5 uma bexilongwa kaningi kwezokwelashwa futhi kuthathe izinyathelo zokuvikela i-thrombosis.
Ochwepheshe bancomela iziguli:
Yilwa nemikhuba emibi
Yenza ngokwejwayelekile isisindo somzimba
Gada ukudla okudlayo, ngaphandle kokudla okunama-khalori amaningi nokudla okunamafutha,
Gcina ukusebenza komzimba kusezingeni elifanele,
Thatha izidakamizwa ezivimbela ukukhula kwe-thrombosis "Aspirin Cardio", "Thrombo Ass", "Cardiomagnyl",
Thatha imali ku-atherossteosis - "Lovastatin", "Atorvastatin", "Atromidine", "Clofibrin",
Vakashela udokotela ohlinzayo wemithambo njalo.
Ukuhlinzwa kwe-arterial bypass okwamanje kwenziwa kaningi ukwedlula i-venous, ngenxa yokuhlasela okuphezulu kakhulu kwe-pathological arterial. Lokhu kuhlinzwa kuvame ukuba ukuphela kwendlela yokubhekana nokukhombisa okunzima kokuntuleka kwe-arterial. Ukungenelela okuhlinzayo kuthuthukisa kakhulu impilo yempilo yeziguli futhi kuvimbele ukukhula kwe-gangrene yemikhawulo ephansi.
Ngabe izikebhe zomlenze zibhidliza yiphi injongo?
Isilinganiso sokuphoqelelwa kwezifo zemithambo nemithambo yegazi sidlula emithanjeni yemikhawulo ephansi. Ukwelashwa emazingeni okuqala kwenziwa ngokucophelela. Iziguli ezihlushwa izilonda ze-atherosulinotic zinikezwa izidakamizwa ezinciphisa i-lipid (i-Atorvastatin, imishanguzo yeFenofibrat), kanye nokudla. Ngemithambo ye-varicose, egqoke izingubo zangaphansi ezikhethekile ze-elastic, kunconywa i-sclerotherapy. Ukudonswa kwemikhumbi yemikhawulo engezansi kwenziwa ngokuvaleka okukhanyisiwe kwe-lumen ye-artery noma i-vein, ingozi enkulu ye-thrombosis kanye nokukhula kwe-gangrene. Le nqubo inqubo yokuhlinzwa, kufanele yenziwe nge-angiosurgeon. Ukuhlinzwa kweBypass ukufakwa kwengxenye yomkhumbi ufakelwe. Ngenxa yalokhu, ukuhanjiswa kwegazi kuyabuyiselwa, futhi ubungozi be-thrombosis buncishiswa kakhulu. I-shunt ingenziwa ngezinto zokwenziwa noma izicubu zesiguli. Imvamisa imithambo yemilenze ephansi esetshenziselwa ukufakelwa. Ukukhethwa kwezinto ezibonakalayo kuncike kububanzi be-artery elonakalisiwe noma i-vein, kanye nasezimpawu ze-pathology.
Konke kuhamba ngemikhumbi edlula emikhawulweni ephansi
Imikhumbi yabantu esesimweni esiphilile ngaphakathi inendawo ebushelelezi futhi eyisicaba.
Ukuvela kwe-atherosclerosis kubonakaliswa ukwakheka kwama-plaque anciphisa i-lumen yemikhumbi, okubangela ukuphazamiseka kokugeleza kwegazi, kanye nokunyamalala kwe-lumen kuvimbe ngokuphelele ukuhanjiswa kwegazi kwizicubu, okubangela i-necrosis.
Lapho impi yokulwa nokuvalwa kwemithambo yezidakamizwa ingasebenzi, phendukela ekuhlinzeni.
Ukuhlinzwa kwe-vascular bypass kubizwa ukuhlinzwa ukubuyisela ukutholakala kwegazi okujwayelekile engxenyeni ethile yomzimba. Emaphethelweni aphansi, lokhu kwenziwa ngama-vasal prostheses - shunts, noma ukudala ukuxhumana (anastomoses) ngemikhumbi eseduze. Uhlobo lokusebenza luthonywa umgomo okufanele uzuzwe ngenxa yokungenelela.
Isibonelo, ngesikhathi se-femering-aortic shunting, ukufakwa kwe-prostrate ye-intravascular kukhethiwe, ngoba kule ndawo umkhumbi ubonakala kakhulu ezilondeni ze-atherosclerotic. Ukuncipha okuholela ngokuhamba kwesikhathi kubangela i-gangrene eyodwa noma zombili izitho.
Ubuchwepheshe besimanje be-endoscopic buvumela ukuthi kusetshenzwe ngokwazisa nge-shunt ngokusebenzisa i-artery usebenzisa i-anesthesia yendawo, engenabungozi kakhulu kubantu asebekhulile nababuthaka kunabantu jikelele.
Ukuhlinzwa kwethambo eliphansi yenziwe emacaleni alandelayo:
I-Aneurysm yemithambo ye-peripheral.
Contraindication to stenting noma i-angioplasty.
Ubuhlungu obungapheli emlenzeni, usongo lwe-gangrene kanye nokwehluleka ukwelashwa ngezidakamizwa.
Ukuvalwa kwemikhawulo engezansi, isiguli akufanele siqambe amanga. Umuntu ongagxiliwe unqunywa ngenxa yesifo esinamandla esidala ukubanda.
Ukubuyiselwa Kwemuva Kokusebenza
Ukusebenza kuthatha amahora angama-1-3. Ngemuva kokuphothulwa kwayo, kwesinye isikhathi kuyadingeka ukufaka imaski ye-oksijini, futhi kungakapheli izinsuku ezingama-1-2 i-anesthetic ibhaliswa kusetshenziswa i-dropper. Nge-anesthesia ye-epidural, inaliti ayikhishwa ngezinsuku ezingama-3-5. ukunciphisa izinhlungu. Ngemuva kokukhishwa kwayo, ama-painkiller anikezwa ngokushesha. Njengezindlela zokuvuselela isikhungo sezokwelapha, kusetshenziswa okulandelayo:
Ezinsukwini eziyi-1-2 zokunciphisa ukuvuvukala nobuhlungu, izingqimba ezibandayo imizuzu engama-15 ukuya kwengama-20.
Ukugqoka amasokisi namabhuzu akhethekile ukuvimbela ukuhlukaniswa kwegazi.
Ukusetshenziswa kwe-spirometer evuselelayo ethuthukisa umsebenzi wamaphaphu.
Ukuhlolwa njalo kwezehlakalo ukubona izimpawu zokutheleleka.
Ngemuva kokuphuma esibhedlela ukuthola kabusha okuphumelelayo, kuthathwa lezi zinyathelo ezilandelayo:
Ukuhamba ngokwakho ngokwanda ibanga nsuku zonke, okuzokwenza imilenze yakho iqine.
Ngesikhathi sokulala nokuhlala, izingalo kufanele ziboshwe.
Gcina amanxeba e-postoperative eyomile ngaphandle kokusebenzisa i-powder noma i-powder.
Ungadli ukudla okunamafutha noma intuthu.
Landela imiyalo kadokotela bese ubuyela empilweni yansuku zonke.
Ukusebenza kwe-atherosulinosis yemikhumbi yemikhawulo engezansi ngenhla ye-inguinal ligament
Ukungenelela engxenyeni ye-aortic-iliac kunempumelelo enkulu yokuqala neyokuhlala isikhathi eside, futhi ngokuhlanganiswa nemikhumbi ejwayelekile ye-distal kuholela ekuphakanyisweni okuphakeme kuzinga lempilo.
Ukuhlinzwa kwe-atherosulinosis yemikhumbi yemikhawulo engezansi engxenyeni ye-femoral-popliteal kubonakaliswa imvamisa ephezulu kakhulu yokwehluleka okuyisisekelo nokuqina okungekude kwesikhathi eside semikhumbi.
Ngakho-ke, ukungenelela kwe-endovascular kufanele kusetshenziswe kuphela kwiziguli ezine-lesion yendawo kanye ne-prognosis enhle.
Ukubonakaliswa kwemitholampilo kwe-infrarenal aortic stenosis kuvame ukukhula kwabesifazane, ikakhulukazi nge-hyperlipidemia. Izilonda ezilula ziqedwa kangcono yi-balloon dilatation. Impumelelo eyinhloko yalokhu kungenelela idlula i-90%, kanye nokuqina kwe-vascular esikhathini eside (iminyaka engu-4) kuphikelela ngamacala angama-70-90%.
Azikho izivivinyo ezenziwa ngokungahleliwe ezibonisa ukusebenza kahle okukhulu kwamazinyo, kungenzeka ukuthi ngeke zibangelwe ukwanda okuphansi kwalokhu kuhlukahluka kwalesi sifo. Uma i-stent ivimbela i-embolism, khona-ke ingafakwa endaweni ye-stenosis enkulu noma eccentric.
Impumelelo yezobuchwepheshe yokuxinana kule ndawo ingu-90-100%, kanti nokuqina komkhumbi ngemuva kweminyaka emi-4 kucishe kulingane ne-90%.
Ama-stenoses alula wemithambo ye-iliac aqedwa kalula ukufakwa kwe-balloon. Izinga lempumelelo eliphambili lifinyelela kuma-88-99% ngesilinganiso sokulinganiswa okuyisilinganiso esingu-3.6%. Ukuhlala isikhathi eside komkhumbi kungama-67-95% ngemuva konyaka owodwa, ama-60-80% ngemuva kweminyaka emi-3 no-55-80% emva kweminyaka emi-5. Imiphumela elingcono ingalindelwa uma ingxenye emfushane ithintekile.
Naphezu kokuntuleka kwedatha ethembekile evumela ukufakwa kwe-stenosis yemithambo ye-iliac, indlela iyaqhubeka ukusetshenziswa ngokwesiko.
Ekusebenzeni komtholampilo, kukholelwa ukuthi i-stenting engxenyeni ye-aortic-iliac iboniswa uma ngabe ukwehluleka kwe-angioplasty - ukubuyela emuva kwe-stenosis, ukuvinjwa kokugeleza kwegazi noma ukwehla kwengcindezi yensali endaweni ethintekile (yize kungekho ukuvumelana kokuthi iziphi izinguquko ezingabhekwa njengezinokubaluleka kwe-hemodynamical lapho kulinganiswa umfutho we-iliac imithambo). Izindonga zisetshenziswa futhi lapho kunobungozi obukhulu bokuhluleka kweyisisekelo (isib, i-eccentric stenosis, i-iliac artery occlusion) noma i-distal shipping embolism. Kuboniswe ukuthi ukubekwa ngokuqinile kwe-stent uchungechunge lwe-iliac stenosis kubonakaliswa yimpumelelo eyisisekelo yezobuchwepheshe kuma-95-100% wamacala anesilinganiso sokukhathazeka okuyisilinganiso esingu-6.3% kanye nokuqina kwemithambo yesikhathi eside okungama-78-95% emva konyaka 1, 53-95% emva kweminyaka emi-3 no-72% ngemuva Iminyaka emi-5Le miphumela ingcono kune-angioplasty kuphela, kepha ayitholakalanga ekuvivinyweni okungahleliwe.
Ukuhlaziywa kwe-meta ngemiphumela ye-angioplasty kanye ne-stenting ekuqothulweni kwe-atherosulinosis yesigaba se-aorto-femoral (ezimweni eziningi lezi kuyizifundo zokubuka) kubonisa ukuthi i-stenting iyahluka uma iqhathaniswa ne-angioplasty:
- imvamisa ephezulu yempumelelo yezobuchwepheshe,
- imvamisa efanayo yezinkinga,
- ubungozi obuncishisiwe bokwehluleka kwesibindi esikhathini eside ngama-39%.
Okwamanje, izivivinyo ezenziwa ngokungahleliwe zomsebenzi we-atherosulinosis yemikhumbi esezingeni eliphansi okwamanje azanele. Isivivinyo esaziwa ngokuthi i-Richter randomised asishicilelwe ngokuphelele kumaphephabhuku abukezwe ontanga, kukhona ukufingqa kuphela.
Ngakho-ke, iziguli ezinesifo sokuqina kwemithambo ye-iliac zazifakwa ngokungahleliwe eqenjini le-angioplasty ne-stenting. Eqenjini elihlabayo, imvamisa ephezulu yempumelelo yokuqala kanye nokutholakala kwengqondo yomkhumbi iminyaka emi-5 (64.6% kuqhathaniswa nama-93,6%). Kanjalo naseqenjini elihlabayo, imvamisa yempumelelo yomtholampilo inyuke ngemuva kweminyaka engu-5 isuka ku-69.7 yaya kuma-92.7%.
Kodwa-ke, ukuntuleka kokushicilelwa okusemthethweni kusenza singabaze ukwethenjwa kwale datha.
I-Dutch Iliac Stent Trial Group isishicilele isivivinyo esingahleliwe sokuxhuma okuyisisekelo nokuphikisana nokukhetha kweziguli ezine-eleal arteriossteosis obliterans.
Kulolu cwaningo, iziguli ezingama-279 ezine-HRP (i-centudent claudication) kanye nesifo se-artery esi-artery (kufaka phakathi izibonakaliso eziyi-12 kuphela) zenziwa zafakwa ohlelweni lwamazinyo okuqala noma esixhosheni ngemuva kwe-angioplasty uma i-gradient eseleyo eyisilinganiso idlula i-10 mmHg.
Abaphenyi abatholanga mahluko phakathi kwalezi zinqubo ezimbili, ekulandeleni kwesikhashana kanye nesikhathi eside, ngaphandle kokuthi ukugcotshwa kwamagama kwakushibhile kunokuphikisana okugcwele.
Baphethe ngokuthi ezigulini ezine-HRP kanye nezilonda zemithambo ye-iliac, ukukhetha amagama anethuba kunethuba elingaphezu kokufaka amazinyo. Kodwa-ke, isivivinyo besisuselwa emcabangweni wokuthi ingcindezi eyizinsalela ye-gradient ngemuva kwe-angioplasty iyinto eqhubekayo yokuthola imiphumela emibi.
Okwamanje, akukho sizathu esingathi sína sesayensi salokhu, ngaphezu kwalokho, azikho izivivinyo ezishicilelwe ngokungahleliwe eziqhathanisa i-angioplasty eyodwa ne-stenting for atherosclerosis yemikhumbi yemikhawulo engezansi (ukukhetha noma okunye) ukukhombisa ngokusobala ukuphakama kokuqina.
I-Angioplasty ene-ileal artery stenosis ukungenelela okusebenzayo nokuphephile. Izindonga kufanele zisetshenziselwe kuphela imiphumela engezansi ye-angioplasty noma i-stratification ephazamisa ukuhamba kwegazi, yize kusafuneka ucwaningo oluningi.
I-Iliac artery occlusion nayo ingaqedwa nge-balloon angioplasty. Isivumelwano se-transatlantic inter-umphakathi sabuyekeza ukulingwa kwezempilo kwe-angioplasty kwe-iliac artery occlusion.
Ngokuya kokubuyekezwa, kubikwa ukuthi imvamisa yokuphumelela kwekhono lokukhwabanisa ingu-83%, isilinganiso esiphindwe kabili sokuphikisana kube ngu-6%, ukuvikeleka kwemisipha ngemuva konyaka ongu-1 kugcinwe kumacala angama-68%, kuthi emva kweminyaka emi-3 - ku-60% (yize kungafakwanga imvamisa yokuhluleka kobuchwepheshe okuyisisekelo , khona-ke inkomba yokugcina iyanda ibe ngu-85 no-77%, ngokulandelana). Olunye uchungechunge lwezifundo lukaLeu et al. Alufakiwe ekubuyekezweni kwesivumelwano se-Transatlantic Cross-Community Agreement. Ibika izehlakalo eziphakeme ze-distal embolism (24% yamacala) ekwelashweni kwe-Iliac artery occlusion ene-angioplasty kuphela.Umuzwa wokuthi ukufakwa kohlanga luzoqinisa isikhumba esikhulu futhi ngaleyo ndlela sinciphise ubungozi bokuqunjelwa ngesinye sezizathu eziphambili zokuqina kwamazinyo. Okwamanje, ubufakazi bokusekela le ndlela (kanye neqiniso lokuthi ukufakwa kwamazinyo kuthuthukisa ubunikazi bemikhumbi) kulinganiselwe. Ngokwesivumelwano seTransatlantic Inter-Community Agnes, isilinganiso esiphakathi sempumelelo yezobuchwepheshe lapho sifaka i-iliac artery occlusion singama-82%, isilinganiso esiphansi sokuphikisana singu-5.6%, kanti ubunikazi bendawo ngemuva kweminyaka engu-1 no-3 no-75% no-64%, ngokulandelana, banda bufika kuma-90 nakuma-80% ku Ukuqedwa kokwehluleka okuyisisekelo kwezobuchwepheshe. Imiphumela etholakele ihluke kancane nje kune-angioplasty, futhi silindele ukuthi imiphumela yesivivinyo esingahleliwe senziwe eSheffield.
Ukuhlinzwa kweBypass kwe-atherosulinosis yemikhumbi yemikhawulo engezansi ngenhla ye-inguinal ligament
Ukuhlinzwa okufana nokuhlinzwa kwe-aortic-femoral-femoral bypass kunemiphumela emihle yokuqala. Ngasikhathi sinye, i-patency yeminyaka eyi-5 ifinyelela kuma-85-90% ngesilinganiso sokufa kwe-1-4%. Okwamanje, kunobungozi bokutheleleka nge-shunt kanye nokungasebenzi. Ukuhlinzwa ngobuningi besifazane noma i-iliac-femoral bypass yindlela enhle yezobuchwepheshe ekwelapheni izilonda ezinobunye.
Ngaphezu kwalokho, ezigulini ezine-HR, i-patency ye-vascular ngemuva konyaka owodwa iyaqhubeka ngamaphesenti angama-90 wamacala. Inzuzo ibuye ihambisane nokufa okuncane kanye nobungozi obuphansi bokungabi namandla kwe-neurogenic. Ukuxhunyelelwa kwe-Iliac-femoral bypass kuhlinzeka ngokuqina okungcono kwe-vascular kuqhathaniswa nokuxhunyelelwa phakathi kobesifazane.
Kodwa-ke, ukucubungula okukhulu kokubuyisela emuva kanye no-arhente womthambo we-iliac ongabonakali, kuyadingeka ukuthi enze ukuhlinzwa kwe-iliac-femoral bypass. Ngaphambi kokwenza ukuhlinzwa kwe-femal bypass, ukunqanyulwa komthambo we-donor eyiac usebenzisa i-angioplasty noma i-stenting kufanele kususwe.
Kodwa-ke, esimweni sokuphamba okuphathelene nezilonda ezimbili zesahlukwana se-aortic-iliac, kungcono ukwenza ukuhlinzwa kwe-aortic-femoral-femoral bypass, ngoba ubunikazi besikhathi eside bemikhumbi buphakeme.
I-Patency ye-axillo-femoral-shunts ye-femal isalokhu yimbi, ngakho-ke, ukusetshenziswa kwayo akunangqondo ezigulini ezine-HR. Njengoba i-angioplasty ye-percutaneous ne-stenting isakazekile, ukusetshenziswa kwe-endarterectomy yezilonda zasendaweni ze-aorto-iliac akunakulungiswa.
Ezigulini ezinokulimala kwezigaba eziningana, kunengqondo ngokwengeziwe ukuhlola ukusebenza kwengqondo kokungenelela kwengqondo kunokwenza ukwakhiwa kabusha okuhlangene kwemithambo ngenhla nangaphansi kwe-inguinal ligament.
Ngokwesiko, i-lapanotomy ese-Median isetshenziselwa ukufinyelela i-aorta, yize ingxenye yesiphambano ye-oblique ivumela ukubonakaliswa okungcono komkhumbi futhi ibangela nobuhlungu obuncane be-postoperative. Ukufinyelela kokubuyisela emuva, i-unilateral transverse noma i-oblique incision iyasetshenziswa, kepha ukubuka konke kubi kakhulu.
Kunobufakazi obunqunyelwe bezinzuzo zokuthola kabusha i-retroperitoneal noma ukufinyelela nge-laparoscopy esisizayo. I-proximal anastomosis kumele isetshenziswe iphezulu ngangokunokwenzeka, ngoba izingxenye zomkhumbi azihlaseli kakhulu kwinqubo ye-atherosulinotic. I-Anastomosis ingafakwa isiphetho ukuphela noma ukuphela eceleni.
Ngesikhathi sokuhlinzwa kwe-atherosulinosis yemithambo yemikhawulo engezansi, ukubonwa kwe-anastomosis engapheli kuyavezwa nge-aneurysm ehambisanayo noma i-aortic occlusion efinyelela emithanjeni ye-renal.
Abanye odokotela abahlinzayo bathi lokhu kulungiswa kunikezela nge-patency yesikhathi eside engcono kanye nengozi ephansi yokuqalwa kwe-aorto-duodenal fistula, yize kungekho zilingo ezingahleliwe. Kodwa-ke, i-anastomosis iphela emaceleni kulula ukuyifaka, ngengozi encane yokungabi namandla. Ngaphezu kwalokho, le ndlela ikuvumela ukuthi ulondoloze imithambo ye-mesenteric ephansi neyangaphakathi yangaphakathi.
Ukusebenza kokungenelela kwe-endovascular for HR ngenxa yomonakalo engxenyeni yabesifazane-popliteal akucaci kangako ngenxa yemiphumela yokuqala emangalisa yezinhlelo zokuzivocavoca ezilawulwayo. Yomibili imiphumela ye-angioplasty yokuqala neyasekupheleni imibi kakhulu kunaleyo yengxenye ye-aorto-iliac.
Phakathi naleso sikhathi, umphumela kanye nesikhathi sokuhlinzwa kwe-atherosulinosis yemikhumbi yendawo ephansi, kokubili engxenyeni ye-aorto-iliac kanye nesigaba sowesifazane-popliteal, kuya ngokuqina, degree kanye nohlobo lesion.
Izinga lokuphumelela eliphelele le-angioplasty lingama-90%, izinga lokuphindaphindwe libe ngu-4,3%, kanye nokuqina ngemuva kuka-1, 3, iminyaka emi-5 lihlala kuma-61, 51 no-48% wamacala, ngokulandelana, akhuphuka aze afike ku-71, 61 no-58% ngaphandle kobuchwepheshe obuphambili. ukwehluleka.
Njengasendabeni yengxenye ye-aortic-iliac, i-stenting ihlolwe ukuthuthukisa imiphumela. Kodwa-ke, yize impumelelo yezobuchwepheshe yale nqubo iphakeme (98%), ubunzima buvame kakhulu (7.3%), kanti nokuqina kwemithambo kucishe kufane - ama-67% ngemuva konyaka owodwa no-58% ngemuva kweminyaka emi-3.
Ukuhlaziywa kwe-meta kwakamuva nje, kufaka phakathi izifundo zokuhlolisisa, kuphakamisa ukuthi i-stenting inethuba elihle ezigulini ezine-pathology enzima nezilonda eziyinkimbinkimbi kakhulu, yize ababhali bevuma ukuthi lo mphumela ungaba ngenxa yamaphutha wokushicilela.
Ngokuvamile, ngisho nokulingwa okungahleliwe akubonisi izinzuzo zentambo yendabuko futhi (ngokungafani nemithambo ye-coronary) akusekeli ukusetshenziswa kwezinsimbi ezikhulula izidakamizwa. Ngakho-ke, ukunamathela ngokuvamile akudlali kunoma iyiphi indima ekwelashweni kwe-atherosulinosis yesigaba sowesifazane-popliteal, ngaphandle kwe-angioplasty eyinkimbinkimbi ngokuqina noma i-thrombosis.
Ngokucabanga ngalezi zinto, kanye nezinkinga zokusebenza kwe-atherosulinosis yemikhumbi esezingeni eliphansi, isivumelwano se-Transatlantic somphakathi sibonisa ukuthi ukukhetha phakathi kokulashwa okungapheli noma kokuhlinzwa okuphathelene ne-atherosclerosis engxenyeni ye-femoral-popliteal ku-PH kufanele kube kususelwa ku-morphology yesifo. Kulokhu, izilonda zohlobo A olunzima kakhulu ku-A zelapheka kangcono nge-angioplasty, kanye nezilonda eziyinkimbinkimbi zohlobo D ngokuhlaselwa kokuhlinzwa. Akunandawo yezindawo zokwelapha ezijwayelekile zesifo sezinhlwayi zesitho sangasese sowesifazane.
Abukho ubufakazi bokusekela ukusetshenziswa kwezinye izindlela ze-endovascular, ezifana ne-lasers, amadivaysi e-atherectomy, kanye nezinto ezihlwabusayo, njengoba kungekho bufakazi bokuphakama kwabo ngaphezulu kwe-angioplasty / stenting in anherosclerosis obliterans of aorto-iliac or femoral popliteal segment. Kodwa-ke, kunobufakazi obunqunyelwe ukuthi i-brachytherapy ithuthukisa imiphumela ye-angioplasty / stenting, kepha ubufakazi obuningi buyadingeka ngendima yale ndlela ekuzivivinyweni kwempilo kwansuku zonke.
Abukho ubufakazi obungenhloso bokusekela ukuphumelela kokuzwela kwe-lumbar ekuqothulweni kwe-atherosclerosis. Ukungenelela akukhulisi ukuphuma kwegazi ekuphumuleni noma ngesikhathi sokuvivinya umzimba.
I-Lumbar sympathectomy idlala indima ekwelashweni kwe-CIC (i-limb ischemia ebalulekile) engenakwakhiwa kabusha ngoba iphazamisa ukuzwela kwesikhumba futhi inikeze izinga elithile le-analgesia.
Indima yokwelashwa kokuhlinzwa
Unombuzo noma awuqondakali? Buza isihleli se-athikili - lapha.
Indima yokusebenza kwe-atherosulinosis yemithambo yemikhawulo engezansi ihlala ingaqinisekile futhi, okokuqala, lokhu kukhathaza ngomonakalo wemithambo yegazi ngaphansi kwe-inguinal ligament.
Intokozo yokuqala yanyamalala ngokwazi ukuthi ukungasebenzi komzimba kanye nokufa kwabantu ngesikhathi sokuhlinzwa okuhlinzwa kweziguli ezinesifo senhliziyo esijwayelekile esihambisana nokuntuleka okwanele kwezihibe kungenzeka kungabi ngcono kakhulu kunalesi sifo ngaphandle kokungenelela. Wonke udokotela ohlinzayo wamathambo uyazi isiguli esikwelashwa saphela ngokunqanyulwa ngemuva kokukhubazeka noma ukutheleleka kwe-shunt.
Le ndatshana yalungiswa futhi yahlelwa ngu: udokotela ohlinzayo I. B. Pigovich
I-arterial thrombosis yemikhawulo ephansi
Uhlobo lokungenelela Izindleko
isifo sokuqina kwemithambo yemithambo yemikhawulo ephansi (i-aterectomy, i-thrombolysis, i-balaton dilatation, ukugcwala kwemithambo ye-pelvic, imikhawulo ephezulu nephansi) 120.000 - 280.000 rub.
Vein Thrombosis: Okuvamile
I-Thrombosis kanye ne-atherosulinosis yemikhumbi yemikhawulo engezansi yizifo ezinkulu. I-Thrombosis ne-atherosclerosis kwenzeka ngokuhlobene nokuhamba kwegazi okungahambi kahle. Imvamisa, lezi zifo zidala umonakalo omkhulu emithanjeni kanye noshintsho oluningi lwethrophic ezicutshini zamalumbo (phansi).
I-Thrombosis ingabizwa ngokuthi yinkimbinkimbi ye-atherosclerosis. Ngalesi sifo, ukuqhekeka okuphelele komkhumbi (umthambo) kwenzeka.
Ukuvelela kwe-vein kwemikhawulo engezansi kungenzeka ngezimpawu ezifana:
Ukuguguleka kodonga lwe-vascular (vein wall).
Izifo ezibangela ukuphazamiseka kwegazi.
Izilonda zodonga lwe-vascular (vein wall).
U-fig. 1. Izigaba zokuqina kokuqina kokuqina kwengqondo lapho kwenzeka i-atherosclerosis ye-artery engaphezulu yobuchopho besifazane (PBA): a) isibonakaliso (i-occlusion) se-PBA, b) ukuphinda kufakwe kabusha kwe-occlusion ye-artery ngomhlahlandlela, c) ukufakwa kwe-intravascular stent (dilator) emithanjeni ethintekile (imithambo), ngemuva kokungenelela - Ukuqina kwe-artery kubuyiselwe ngokuphelele.
U-fig. 2. I-endovascular stenting for the atherosulinotic vidions of the artery (veins) of the pelvis: a) stenosis of iliac artery (arrow), a jumla occlusion we-iliac artery (veins) (umcibisholo ophindwe kabili), b) ngemuva kokungenelela - ubunikazi bemithambo (imithambo) ye-pelvis ibuyiselwe ngokuphelele ( imicibisholo).
I-acute thrombosis ivame ukuvela ngokumelene nesizinda se-atherosulinosis yemithambo. Ngasikhathi sinye, akulula ukumisa ukuqhubeka kwesifo.
Kubalulekile! Isifo se-Vascular (vein) sivamile futhi siyinkohlakalo. Ngokwezibalo, ingxenye yeshumi yabantu ihlushwa yiyo. Okusengozini kakhulu ngabesilisa abaneminyaka yobudala engama-60-65. I-Thrombosis nayo itholakala ezigulini ezincane. Ngaphezu kwalokho, ukushona kwezifo eRussia kufinyelela kuma-61%.
Ingabe i-pathology ingavinjelwa?
Yebo! Uma ubhekisisa impilo yakho.
Ngokuvimbela i-thrombosis, izincomo eziningi kufanele zilandelwe:
Gwema ukomisa. Isici esiyinhloko ekwakhekeni kwe-thrombosis ngokuqondile ukuntuleka kwamanzi. Phuza hhayi kuphela uma ufuna ngempela! Sebenzisa okungenani amalitha ama-2 amanzi ngosuku.
Ngena kwezemidlalo, kwezokuzivocavoca. Khumbula ukuthi ukuvivinya umzimba ngokulinganisela kuvuselela inhliziyo. Lokhu kukuvumela ukuthi usheshise ukuhamba kwegazi. Ngenxa yalokhu, i-thrombosis ingagwenywa.
Qaphela ukudla. Ingozi ye-thrombosis inyuka ngokusetshenziswa ngokweqile kokudla okuqukethe i-cholesterol. Gwema ukudla okuthosiwe, okunamafutha. Ukuvimbela i-thrombosis, sebenzisa izithelo nemifino eminingi, uyeke utshwala, ubheme.
Kubalulekile! Kulula ukuvikela i-thrombosis, kepha ingelashwa iminyaka! Kungakho kudingekile ukuthi ubhekisise kahle isimo sempilo lapho kuvela ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona i-thrombosis yemithambo ehlukahlukene. Ngakho-ke ungavimba ukuvela kwe-pathology efana ne-thrombosis yemithambo ethile. Noma kwenzeka i-vein pathology, ochwepheshe bazokwazi ukubhekana nayo ngempumelelo.
Ukwelashwa kwe-thrombosis kanye ne-atherosclerosis
Eminyakeni yamuva, ekwelapheni i-atherosulinosis, i-thrombosis of artery (veins), izindlela ze-endovascular (intravascular) zisetshenziswa kabanzi - i-stenting (endoprosthetics) ne-balloon angioplasty.
Ochwepheshe emkhakheni we-angiology kanye nokuhlinzwa kwemithambo wezinhlangano ezaziwa kakhulu zaseMelika, zaseYurophu nezaseRussia (i-ROACX, ACC / AHA, TASC, CIRSE) batusa ngokuqinile ukubabheka njengendlela yokwelashwa kwe-occlusions (blockages) yombhede we-arterial we-pelvis kanye ne-limb (ephansi) nengxenye i-stenosis, kungakhathalekile ukuthi iphi indawo yesilonda.
Iningi kakhulu lochwepheshe abavela emazweni amaningi omhlaba batusa ezimweni eziphuthumayo lapho lesi sifo sigcwala ukusikwa kwengalo, okokuqala ukungenelela kokuphela kwanoma yiluphi uhlobo, ngisho nezindlela ezisezingeni eliphakeme kakhulu ze-atherosranceosis, zicabanga ukuthi ubuciko bemithambo buzohlala izinyanga eziyi-12 kuya kwezingu-24 ngemuva kokuhlinzwa. Isizathu salokhu iqiniso lokuthi inqubo yokuqeda ngokushesha izimpawu zomtholampilo iyaqhubeka.Ngaphezu kwalokho, ukuhlinzwa kwe-endovascular for thrombosis of veins ahlukahlukene kuvumela, uma kunesidingo, ukungenelela okuphindaphindwayo okulandelayo okuphindaphindayo noma ukungenelela kwemithambo yendabuko.
Ukusebenza isikhathi eside kwezokwelapha kukhombisa ukuthi, ngaphandle kokusebenza okukhulu kwezindlela ze-endovascular zokwelapha lesi sifo, kwezinye izimo zomtholampilo, ukuhlaselwa kwe-x-ray ukuhlasela akunakwenzeka ngenxa yezizathu eziningi zenhloso.
Ngakho-ke, ngokusho kweCaring Cross Congress eqhubekayo, eyenzeka eLondon ngoMeyi 2013, kwacaca ukuthi ukuqina kwamakhemikhali kokuqina kwemithambo etholakala esifundeni se-popliteal nasesothangeni, uma isiguli sihamba ngokuqhubekayo, kungaholela ezinkingeni ezithile kumacala ayi-10-30% , ehambisana nokuqhekeka kwe-stent yensimbi (isandiso), noma ukuphinda uqambe kabusha. Ngokunikezwe lawa maqiniso angenakuphikwa, ngaphezu kwe-80% yalabo ababambe iqhaza kule nhlangano eshiwo ngenhla baphikisana nokufakwa kwezitayela zangaphakathi zokuhlinza emithanjeni.
Ingabe ukwelashwa kungenzeka emtholampilo waseMoscow?
Ochwepheshe abanolwazi bakulungele ukusiza zonke iziguli ezine-thrombosis!
Okokuqala, imithambo ihlolwa ngokuphelele.
Ukuze wenze lokhu:
Ukuhlolwa kwangaphandle kwemithambo kanye nomzimba wonke. Ikuvumela ukuthi uqophe ukuqina kwesikhumba, ukulahleka kwezinwele, izipikili ezinqwabelene, isikhumba esincibilikile, izilonda, ukuqina kwemisipha yelunga.
I-Palpation. Uchwepheshe unaka ukushisa kwesikhumba. Nge-thrombosis, i-asymmetry yokushisa kuthiwa. Ngaphezu kwalokho, udokotela angalungisa ukuntuleka kwe-ripple.
Indlela enkulu esetshenziswayo yokuhlola imithambo yegazi ukuskena okuphindwe kabili, noma i-dopplerography. Udokotela angahlola isimo sezindonga zemithambo, ukuba khona kwezilonda, izici zokucindezelwa kwangaphandle.
Imithambo ye-CT ne-MRI nayo ingenziwa.
Uzobona nini udokotela? Yiziphi izimpawu ze-vein pathology okufanele ngizibheke?
Kubalulekile ukuqonda ukuthi i-thrombosis yisifo esiyingozi. Ngomonakalo embhedeni we-vascular, kuvela izinkinga ezinkulu. Ungabavimbela ngokuxhumana nodokotela ngesikhathi. I-Thrombosis idinga ukwelashwa ngokushesha.
Yiziphi izimpawu ezibalulekile zokuxilongwa?
Izimpawu ezilandelayo ziyimpawu ye-thrombosis yemithambo ehlukahlukene:
Ubuhlungu emilenzeni lapho uhamba, umsebenzi womzimba. Imvamisa, iziguli zize ziqale ukukhungatheka. Ukweqisa (okuphansi) kuba yindawo ebuhlungu, kuhlale kubangela ukungaphatheki kahle.
Umuzwa wokuxineka. Lolu phawu lwe-pathology lwenzeka lapho ukuphuma kwegazi emthanjeni kuyeka.
Izilonda ezingapholi, amabele emilenzeni. Imvamisa ukubukeka kwawo kusendaweni yonyawo, umlenze ophansi weligi elithintekile.
Ububomvu noma i-pallor yesikhumba semilenze.
Ukubuyiselwa kwemilenze ebandayo, eqandisiwe ngenxa yokuqhekeka kwegazi emithanjeni.
I-Atrophy yezicubu zomlenze. Le Symbomatology ibuye ihlotshaniswe nokuba khona kweziqu zegazi emithanjeni.
I-Alopecia endaweni ephansi yomlenze.
Imvamisa isiguli simane nje singazizwa isilonda (siphansi)!
Kwezinye izimo, kuvela ezinye izimpawu. Zihlotshaniswa zombili izimbambo (eziphansi) nomzimba wonke. Zonke zidinga ukunakwa okukhethekile.
Ngokumangazayo, iziguli zingasho konke ukubonakala kwezinkinga ngemikhumbi yokukhathala, i-malaise. Eqinisweni, ukuphazamiseka kwe-venous akuhambi ukubambezeleka ekwelashweni!
Ukwelapha usebenzisa amasu anamuhla
Ekwelapheni i-atherosulinosis yemithambo ye-pelvic kanye neyemilenze, i-thrombosis yemithambo ehlukahlukene, ochwepheshe e-Endovascular Surgery Center basebenzisa amadivayisi athuthukile kakhulu we-endovascular. Bayakuvumela ukuba ususe imbangela eyinhloko yalesi sifo - ama-atherosselotic plaque kanye nama-thrombotic masses.
Ama-TurboHawk (USA) kanye ne-AngioJet (USA) izinhlelo ze-atherectomy ne-Ocelot (e-USA) zokubuyiselwa kobuningi bezimpawu ezeluliwe zemithambo yegazi (imithambo) asetshenziswa ngokuqinile esikhungweni sethu.Wonke amadivaysi athola ukuqashelwa ezingqungqutheleni zamanye amazwe ngokuhlinzwa kwe-endovascular in 2010 - 2013.
U-fig. 3. I-Endovascular thrombectomy from the iliac artery by AngioJet system: a) thrombosis of the engac artery (imicibisholo), b) ngemuva kokungenelela - i-vein patency ibuyiselwe ngokuphelele (imicibisholo), kanye nokufakwa kwesiqu akudingekile.
U-fig. 4. Umgomo wokususwa kwe-plaque emthanjeni kusuka emikhunjini (emithanjeni): a) isithombe esandisiwe sommese wekhabhoni ngaphakathi kwe-catheter, b) i-catheter idluliswa endaweni ye-vein lesion, c) i-catheter isusa izingxenyana ze-atherosranceotic, d) isisuli se-atheromatous singena kwisigaxa se-catheter. .
U-fig. 5. I-Endovascular athectomy of the artery femoral, b) i-catheter-aterectomy isusa ama-plaque, c) ubuhlakani be-vein buvuselelwa ngokuphelele ngemuva kokungenelela - ISITATIMENDEZO SESITHEMBISO ASIKUFUNI, d-e) ukusikwa kwe-atheromatous ngaphakathi kwe-catheter ngemuva kokususwa.
Ngaphezu kwalokho, uSolwazi S. A. Kapranov nozakwabo basebenzisa kuphela ama-catheters e-drug-camera abopha izidakamizwa. Lokhu kukuvumela ukuthi uthuthukise umphumela wezokwelapha ku-thrombosis yemithambo ehlukahlukene ngo-32-56%. Kubalulekile futhi ukuthi i-endovascular prostheses ibe nesikhathi eside sesiqinisekiso seminyaka engu-5.
Ngokubheka izincomo zochwepheshe abahamba phambili emkhakheni wezokwelapha i-atherosclerotic vidions of artery, thrombosis of ainsins ahlukahlukene, uSolwazi S. A. Kapranov nethimba lakhe basebenzisa kuphela amathuluzi asethuthukile kakhulu ekusebenzeni kwabo kokuhlinzwa ukuze babuyisele imisebenzi ye-vascular (vein) patency.
Ukusetshenziswa kwabo kuqinisekisa ukulondolozwa kwezicubu zomzimba wesiguli, ngenkathi ukufakelwa kwamathambo we-intravascular kungadingeki, futhi umphumela omuhle womtholampilo awunakuphikwa kuma-93% wamacala.
Ochwepheshe besikhungo sokuhlinza se-endovascular abafuni ukuthola umphumela "obonakalayo" obonakalayo ngemuva kokungenelela, kodwa ukubuyisela ubunikazi bemikhumbi yesiguli ngangokunokwenzeka.
Kwenziwa kanjani ukulungiswa kwe-patency?
Ukuhlinzwa kwe-thrombosis yemithambo ehlukahlukene kwenziwa ngaphansi kwe-anesthesia yendawo. Ngokugobhoza odongeni, isingenisi sifakwa emthanjeni. Leli thuluzi yishubhu okufakwa kuwo wonke amathuluzi. Okulandelayo, i-catheter emincane kunayo yonke ihlelwe.
Ngosizo lwayo, kutholakala umkhumbi olimele. Yonke imishini yokwenza izinto yenziwa ngaphansi kokulawulwa kwensiza ekhethekile ye-radiological. Ngenxa yalokhu, udokotela ohlinzayo we-endovascular angabheka isimo semithambo (imithambo), alandele izenzo zawo esibukweni sokuqapha.
I-stent ekhethekile enebhaluni ihanjiswa nge-catheter kwisiza esinciphile. Ibhaluni seluliwe. Ngenxa yalokhu, i-stent iqondile futhi ingahlala ngaphakathi kwemithambo yemikhawulo ephansi.
Kuhlinzwa nini ukuvuselela imithambo yemithambo yegazi?
Lapho kukhona izimpawu ze-atherossteosis, i-thrombosis emithanjeni yemikhawulo ephansi.
Lapho kwembulwa ngesikhathi sokuxilongwa kokwephulwa kwe-patency yemithambo.
Ingabe kukhona okuphikisana nokuhlinzwa kokuhlinzwa emilenzeni ephansi, i-pelvis?
Yebo! Kepha bambalwa kubo:
Izindawo ezinwetshiwe zokunciphisa imithambo.
Ukuqina kwesihlungu, ukwehluleka ukuphefumula.
I-Pathology yohlelo lokuhlangana kwegazi.
I-allergy to iodine, esetshenziswa ngenkathi kuhlinzwa ukubuyiselwa kwemithambo ye-artery nge-thrombosis kanye ne-atherossteosis.
Izinzuzo zendlela esetshenzisiwe
Ukuqedwa kwe-thrombosis emithanjeni ehlukahlukene kusetshenziswa inqubo esetshenzisiwe kunezinzuzo eziningi.
Ezokuphepha Ngesikhathi sokungenelela kokubuyisa ubunikazi besibhede se-vascular, iziguli azivezwa ebungozini obuningi.
Akunasidingo se-anesthesia. Lokhu kukuvumela ukuthi unciphise umthelela omubi kuwo wonke umzimba wesiguli.
Inani eliphansi le-contraindication.Ukuhlinzwa ukuze kubuyiselwe ubunikazi bomkhumbi (umthambo) kwenziwa ngenani elikhulu leziguli.
Akunabuhlungu ngesikhathi sokungenelela. Iziguli azithokozi ngemuva kokuhlinzwa. Lokhu kungenxa yokuthi ama-painkiller anamuhla asetshenziswa njalo.
Ukululama ngokushesha ngemuva kokuhlinzwa ohlelweni lwe-vascular. Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa, isiguli singaphindela empilweni yaso ejwayelekile.
Ukusebenza kahle kakhulu. Ukuhlinzwa ukubuyisa ubunikazi bezombhede wemithambo kunikeza umphumela owuthandayo ezimweni eziningi.
Intengo enhle kakhulu. Kuya ngesilinganiso sokulimala kwemithambo, isigaba se-thrombosis, nezinye izinkomba ezibalulekile. Futhi, izindleko zokuqeda i-pathology zithinteka yizici ezithile ezingeziwe.
Izici zokwelapha esikhungweni sikaProfesa Kapranov
Ukusebenza kahle kakhulu. Ukuguqukela kithi, uthola usizo lochwepheshe futhi kunganqoba i-thrombosis.
Ukuntuleka kobuhlungu. Awunakho ukwesaba! Umsebenzi wokubuyisa i-vein patency ngeke udale ukungaphatheki kahle.
Amakamelo anethezekayo nabasebenzi bezokunaka. Ukhetha isikhungo sokwelashwa ngokwakho. Lokhu kusho ukuthi nguwe uqobo onquma izimo ezifanele zokuhlala esibhedlela, izivivinyo, njll. Umsebenzi wokubuyisela ubunikazi bethambo wenziwa njengoba uhlela.
Yini enquma izindleko zokwelapha i-thrombosis?
Kusukela lula ukuhlolwa okusebenzayo, induduzo kanye nokusebenza kahle kokulaliswa esibhedlela.
Kubalulekile! Lezi zinto azihlobene ngqo nomsebenzi wezokwelapha. Ngenxa yalokhu, ngisho nezindleko ezincane, uthola usizo lochwepheshe.
Ufuna ukubhalisa noSolwazi Kapranov?
Shayela izinombolo zakhe:
Ngokubambisana nawe, udokotela ohlinzayo onesibindi uzokhetha isikhathi esanele sokungenelela kanye nomtholampilo ofanele wezokwelapha ofanele. USergey Anatolyevich uzotshela konke ngendlela esetshenzisiwe, izinzuzo zayo eziphambili. Ungabuza futhi imibuzo mayelana nobungozi, imiphumela emibi yokungenelela.
Ungashayela noma imiphi imitholampilo yezokwelapha lapho uSolwazi Kapranov amukela futhi enze aphoyintimenti nabaphathi.
Izinkomba zokudlula kwemikhumbi engapheli yemikhawulo ephansi
Ukuhlinzwa ukuze kudlule imikhumbi enamaphethelo aphansi kwenziwa emnyangweni okhethekile noma ohlinzayo wesibhedlela. Kusho izinqubo ezinzima, ngakho-ke, kufanele zenziwe kuphela ngokuya izinkomba eziqinile. Kuhle ukuguqukela emikhunjini edlula lapho kungaphezulu kwe-50% yobubanzi bomthambo noma wethambo kutholiwe. Ngaphambi kokuthatha isinqumo ngokuhlinzwa, odokotela banquma ukwelashwa okubuthakathaka. Ukungenelela kokuhlinzwa kwenziwa ngaphandle komphumela wokwelapha. Izinkomba ezilandelayo zemikhumbi edlula yendawo esezingeni eliphansi ziyahlukaniswa:
Amathambo we-arteriossteosis obliterans.
I-pathology emenyezelwe yohlelo lwama-venous. Kaningi ngemithambo ye-varicose nokusongelwa kwe-thrombophlebitis, stenting noma angioplasty kwenziwa. Ngokuphikisana nezindlela ezinjalo zokwelashwa, ukuhlinzwa ngomkhumbi kudlula lapho kwenziwa.
I-Endarteritis. Ngalesi sifo, ukusabela kokuvuvukala kuhlanganiswa nokucekelwa phansi kwemikhumbi emincane okuqhubekayo. Kancane kancane, imithambo yegazi ivaleke ngokuphelele, okuholele ebubini bonyawo. Lesi sifo sivame kakhulu kubantu besilisa.
I-Aneurysm yemithambo yemikhawulo engezansi. I-Pathology iyingozi ngengozi ephezulu yokopha, okunzima kakhulu ukuyiyeka.
Kwezinye izimo, imikhumbi yemikhawulo engezansi idlula lapho ihlangana khona ngezinzwani noma ezinyaweni. I-futurenosis yalokhu kungenelela kokuhlinzwa ayihlali ithandekayo futhi kuya endaweni ye-necrosis kanye nezimpawu zomzimba ngamunye. Kwezinye izimo, ukusebenza kuholela ekwelashweni kwe-gangrene noma ukwehla ngosayizi wokugxila okuthintekile.
Kukuziphi izimo lapho ukweqa kungqubuzana khona?
Naphezu kokusebenza kokuhlinzwa kwe-vascular bypass, kufanelekile ukukhumbula ukuthi ukuhlinzwa okunjalo kubi kakhulu. Ngakho-ke, kwenziwa kuphela ezimweni lapho ezinye izindlela zokwelapha zingasizi. Kunezindlela eziningi zokuphikisana ngokuhlinzwa kwe-bypass. Phakathi kwazo kukhona:
Umfutho wegazi ophezulu olawulwa yimithi ye-antihypertensive. Kulokhu, ukuhlinzwa kwemithambo kungaholela ekushayweni kwe-cardiogenic, infarction ye-myocardial, noma isifo sohlangothi.
Ukwehluleka kwenhliziyo okubolile, okuhambisana ne-edematous syndrome ne-dyspnea ephikelelayo.
Ukwehluleka kwenhliziyo okukhanyayo kanye nokwehla kwezimpawu zomzimba.
I-Aneurysm ye-aorta, imikhumbi ye-cerebral.
Ukuphazamiseka kwesigqi senhliziyo yeParoxysmal.
Ukudilizwa kwemikhumbi yamaphethelo aphansi akunakwenziwa uma kwenzeka izifo ezithathelwanayo, ukulimala esikhunjeni, ukubola kwesifo sikashukela mellitus. Kulezi zimo, ukuhlinzwa kwenziwa ngemuva kokuqina kwesimo sesiguli.
Ngokuvamile, ukuhlinzwa kwe-artery bypass kwenziwa. Lokhu kungenxa yokuthi i-pathologies enjalo ivame kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ngomonakalo we-venous, kunconywa ezinye izindlela zokwelapha. Phakathi kwazo kukhona i-balloon angioplasty ne-stenting. Njenge-shunt yokubuyisela ukugeleza kwegazi kwe-arterial, sebenzisa umthambo we-saphenous wethanga. Njengoba kunendawo enkulu ye-lesion noma isimo esingagculisi semikhumbi, kusetshenziswa ukufakwa kokufakelwa. Kunezindlela eziningi zokusebenzisa. Phakathi kwazo kukhona:
Ukuhlinzwa kwe-aorto-bifemoral bypass. Ukungenelela kokuhlinzwa kwenziwa ezingeni lesifunda se-inguinal. Umnyombo wokusebenza ukwakha i-anastomosis edlula phakathi kwengxenye yesisu se-aorta nemithambo yemithambo yensikazi.
Ukuhlinzwa kwe-popliteal bypass yesifazane. I-anastomosis yakhiwa phakathi kwemithambo emibili emikhulu yomlenze ophansi. Le shunt isukela esisekelweni sethanga futhi ilethwe endaweni yamadolo ahlanganisiwe (ngezansi noma ngaphezulu kwesihlanganisi).
Dlula ngendlela I-Anastomosis idlula phakathi kwemithambo emibili yowesifazane (kusuka emlenzeni wesokudla kuya onyaweni lwesobunxele, noma okuphambene nalokho).
Ukuhlaselwa kwabesifazane. Ukuxhunyelelwa kwemithambo yegazi kuxhumanisa imithambo yesitho sowesifazane kanye ne-tibial.
Amasu wokudlula emikhunjini engenamikhawulo yamaphethelo aphansi
Ukuxosha izikebhe zamaphethelo aphansi kungumsebenzi oyinkimbinkimbi, odinga ubuchwepheshe obuphezulu bohlinzwa. Ukukhwabanisa kwenziwa ngaphansi kwe-anesthesia ejwayelekile. Ukudalwa kwesikhumba nezicubu ezingaphansi kwenziwa ngaphakathi kwezindawo ezi-2 - ngaphezulu nangaphansi kwendawo ethintekile yomthambo. Kufakwa izikejana esitsheni ukuvimba ukopha. Ngemuva kokuhlola indawo ethintekile, kwenzeka i-incision emikhunjini futhi i-shunt ihlelwe ohlangothini olulodwa. Ngokulandelayo, ichopho le-vascular liqondiswa phakathi kwezicubu nemisipha. Ngakho-ke, i-shunt kancane kancane ilethwa endaweni ye-incision yesibili (ngaphezulu kwesikhwanyana) bese ukuphela kwayo kulungisiwe. Ngemuva kwalokho, udokotela ohlinzayo uhlola isimo sokuphuma kwegazi. Lapho i-artery yokuhlinzwa ephumelelayo iqala ukudonsa. Kwezinye izimo, kwenziwa izindlela zokuhlola ezinamandla. Isinyathelo sokugcina sokuhlinzwa ukuhlukunyezwa kwezicubu ezijulile nesikhumba.
Isikhathi sokusebenza sisebenza kanjani?
Ukuqapha isiguli esigulayo sihlinzwe kubaluleke kakhulu. Ikakhulu uma lokhu kudangalisa kudlula imikhumbi yemikhawulo engezansi. Isikhathi sokusebenza ngempumelelo ngokwelashwa okuphumelelayo singamaviki ama-2. Ngosuku lwe-7-10, udokotela ohlinzayo ususa imithungo. Ngenkathi isiguli sisesibhedlela, kuyadingeka ukwenza izinqubo zokuxilonga ukuze uhlole ukusebenza kahle kokwelashwa. Ngaphezu kwalokho, udokotela kufanele aqinisekise ukuthi akukho zinkinga ezenzeka ngemuva kokusebenza. Kakade ezinsukwini zokuqala ngemuva kokuhlinzwa, kunconywa ukusukuma. Esimweni sokuhlala nokulala, izitho ezingaphansi kumele zilungiswe zisezingeni eliphakeme.
Ngemuva kokuvalwa kwemithambo yemikhawulo engezansi, kuyadingeka ukuqapha isimo sokuhamba kwegazi. Kufinyelela lokhu, isiguli kufanele sihlolwe ngezikhathi ezithile (i-ultrasound ne-Doppler ultrasound). Kunconyiwe futhi:
Thatha izidakamizwa ze-antiplatelet ukuvikela i-thrombosis.
Gcina umkhondo wesisindo somzimba. Ngokwanda kwe-BMI, kunqunywa ukudla okwehlisa i-lipid nokwelashwa kwezidakamizwa.
Thatha ukuhamba nsuku zonke.
Gqoka amasokisi akhethekile (amasokisi) nezicathulo.
Ukuhlinzwa kwe-vascular bypass of the lowities: ukubuyekezwa kweziguli
Ukubuyekezwa kweziguli ezihlinzwa kuningi okuhle. Iziguli ziphawule ukwehla kobuhlungu, ukushuba emilenzeni. Kodwa-ke, ezimweni eziningi, abantu bakhala ngokubuya kwezimpawu ngemuva kwesikhathi esithile. Lokhu kungenxa yomonakalo emithanjeni nasemithanjeni yangomakhelwane. Kuhle ukukhumbula ukuthi ukuhlinzwa ngokweqile akuyona indlela yokwelapha isifo sokuqina kwemithambo, futhi imbangela yokulimala kwemithambo ayinyamalali ngemuva kokuhlinzwa. Ngakho-ke, ukuze ugweme i-thrombosis nokukhula kwe-gangrene, kubalulekile ukuqaphela izindlela zokuthibela.
Imikhumbi ye-Bypass yamaphethelo aphansi: izinkinga zomsebenzi
Izinkinga zokuhlinzwa zibandakanya ukwakheka kwegazi eliyisikhumba esiswini, ukuthuthukiswa kokuqina kwenhliziyo, ukuqina kwamaphaphu. Esikhathini sokutakula, ukugcwala kwesilonda endaweni yokugcwala ukopha kusuka kuso kungenzeka. Naphezu kweqiniso lokuthi ukuhlinzwa kuthathwa njengento eyinkimbinkimbi futhi yinde (kuze kube amahora angama-3), izinkinga ziyivelakancane. Imvamisa yokukhula kwabo icishe ibe yi-2%.
Izinhlobo zezinqubo zokuhlinzwa
Njengamanje, izinhlobo eziningana zokungenelela kokuhlinzwa kwamazinga ahlukahlukene obunzima asetshenziselwa ukususa ama-atherosclerotic plaque.
Ekuxilongeni i-atherosulinosis, ukuhlinzwa kohlobo oluthile noma okunye kuchazwa udokotela ohlinzayo ngokusekelwe emiphumeleni yokuhlolwa, kucatshangelwa izici ezithile zesiguli: iminyaka, degree lokuvalwa kombhede we-vascular, isisindo, ukuba khona kwezinye izifo.
Ukusebenza okulandelayo kubhekwa njengokusebenza kakhulu kwe-atherosclerosis yamaphethelo aphansi:
Imithambo yeBypass yemikhawulo ephansi.
Cabanga indlela ngayinye yokuhlinzwa ngokuningiliziwe.
Lolu hlobo lokuhlinzwa lwe-atherosulinosis lwamaphethelo aphansi likuvumela ukuba ubuyisele ukugeleza kwegazi, uqede ukungavinjelwa kombhede we-vascular, ogcina usindisa isiguli engcupheni ye-necrosis yezicubu nesidingo sokunqunywa.
Ukusebenza kwenziwa ngale ndlela elandelayo: kwenziwa indawo encane lapho kutholakala khona umkhumbi othintekile. Ngemuva kwalokho, i-catheter encane enebhaluni ekugcineni ifakwa embhedeni we-artery, embozwe ngama-cholesterol deposits.
Ngemuva kwalokho, umoya uqala ukungena usilinda, obangela ukuba unwebe, uveze ukukhanya okukhanyayo komkhumbi. Uma umphumela ungabonakali umelwe ngokwanele kudokotela, kubekwa idivaysi ekhethekile endaweni efakiwe ukuze ubuyisele ububanzi obujwayelekile bebhede lamathambo.
Enye yezinhlobonhlobo ze-balloon angioplasty ukuhlinzwa okuyinkimbinkimbi, lapho kusetshenziswa ibhaluni elihlanganiswe nokwakhiwa okwelapha. Le ndlela ivumela hhayi kuphela ukubuyisa i-patency ye-artery, kepha futhi ukuvimba ukuthuthukiswa kwenqubo yokuvuvukala, ehambisana nokwanda kwezicubu ze-endothelial.
Umphumela wokungenelela ngesimo se-patency ebuyisiwe yombhede wemithambo uhlala okungenani iminyaka emi-5. Ngemuva kokuhlinzwa, isiguli kufanele sibhekane nenqubo yokuskena ye-Ultra kabili ngonyaka futhi sibalwe i-tomography kanye ngonyaka. Lokhu kukuvumela ukuba ubone ukwanda kwesimo semithambo yegazi nokwelashwa okufika ngesikhathi.
Izinzuzo zokuhlinzwa nge-balloon
Ukuhlaselwa okuphansi: i-catheter ingena nge-micronadder yezicubu esifundeni somkhumbi obhidlikile.
I-anesthesia ejwayelekile ayidingi ukungenelela, i-anesthesia yendawo yanele.
Ukululama kuyashesha - iziguli zivunyelwe ukuhamba kungakapheli usuku.
Ukusongelwa kwezinkinga nokutheleleka kwezicubu ngokuhlinzwa okunjalo kukhishwe ngaphandle.
Kungabiza malini ukuhlinzwa okunje emtholampilo omuhle? Ngokwesilinganiso, intengo yepulasitiki ye-balloon ngaphandle kwe-stent izoba ngama-ruble ayizinkulungwane ezingama-80.
Ukuhlinzwa kwe-Artery kudlula
Kuboniswa ngokuxilonga okulandelayo:
I-atherossteosis obliterans - ukuhlinzwa kusiza ukuqeda ukuqothuka kwe-lumen.
I-Aneurysms yemikhumbi ye-peripheral arterial.
Contraindication kuya ngebhaluni epulasitiki kanye stenting.
I-anesthesia yendawo noma ejwayelekile ihanjiswa esigulini; kusetshenziswa umthambo ongowesifazane owenziwe ngobuhlakani. Lokhu kukhethwa kunesizathu sokuthi ama-atherosulinotic plaque, imikhumbi emikhulu ngokwayo ayakhiwa emikhunjini enobuhlakani yemilenze, ngakho-ke ibhekwa njengefanelekile ukusetshenziswa njenge-shunts. Kwesinye isikhathi izinto zokwenziwa zisetshenziselwa le njongo.
Udokotela wenza ukuhlangana lapho kutholakala khona umthambo ohlukanisile, owakhiwa ezindaweni ezimbili bese kufakwa i-shunt yemvelo. Ukuhlinzwa okunjalo kungokwesigaba sezinkimbinkimbi, okwenziwa kuphela ngodokotela abahlinzayo nabaqeqeshiwe.
Ngemuva kokungenelela, isiguli sithunyelwa ukuhlolwa kwe-ultrasound nokuhlolwa kwe-angiographic ukuqinisekisa impumelelo yokuhlinzwa kwe-atherossteosis.
Isikhathi sokuvuselela singasukela ezinsukwini ezingama-2-3 kuya ngesonto, isiguli kumele silandele izincomo eziningana:
Ukwelashwa njalo ngama-statins nama-anticoagulants.
Imikhawulo yokudla okungenamsoco.
Ukwenqaba imikhuba emibi.
Izindleko zokuhlinzwa ziphakeme impela, emitholampilo yangasese edlula lapho ihlinzwa imithambo yemikhawulo engezansi kungabiza kusuka kuma-ruble ayizinkulungwane ezingama-130 kuya kwangama-170.
Enye yezinhlobo ezingeke zivikeleke futhi zingenabuhlungu bokusebenza kwe-atherosclerosis yamaphethelo aphansi. Isiza ukuqeda ukuphazamiseka kwemithambo yegazi, ukubuyisela isimo sezindonga zemithambo yegazi.
Kunconywe ngokususa ama-atherosclerotic plaque ahlanganisa ngokuphelele i-lumen ye-vascular.
Indlela ye-laser ifaka ukungenelela okuncane kwezicubu, ezenziwe indlela ye-endovascular. Kusho ukuthini lokhu: i-artery ethintekile iyagaywa, kufakwa ithuluzi elikhethekile, inzwa ye-laser ngalo umgodi obumbile. Ngomshini, imishayo ye-laser ingena esikebheni, ibhubhisa idiphozi yecholesterol.
Ukungenelela kwenziwa ehhovisi le-radiologist ngaphansi kokulawulwa kwehadiwethi ukuvikela ukufakwa okungafanele kwedivayisi.
Ngemuva kokuphothula inqubo, i-catheter iyasuswa kanye nezinsalela zokwakheka kwe-cholesterol.
Ngokusho kokubuyekezwa kodokotela abahlinzayo neziguli, ziningi izinzuzo zokwelashwa kwe-laser atherossteosis:
Asikho isidingo se-anesthesia ephelele.
Ukuntuleka kwesikhathi sokuvuselela - isiguli sivunyelwe ukuhamba ngokushesha.
Ithuba lokungenelela nge-contraindication eminingi.
Ukuqedwa kokuvinjezelwa komkhumbi wezinhlanga, ukubuyiselwa kokuhlinzekwa kwegazi emalungeni ngesikhathi esifushane.
Izindleko eziphansi impela - ngokusho kwedatha esemthethweni, inqubo eyodwa ibiza isilinganiso sama-ruble ayizinkulungwane eziyi-15, ngenkathi ufaka i-stent, udinga ukukhokha enye eyizinkulungwane ezingama-4-5.
Kukungenelela okuvulekayo okungenasisekelo kokususwa okuqondile kwama-cholesterol plaque kanye nokubuyiselwa kokuphuma kwegazi okungenampilo.
Ngaphambi kokuhlinzwa, iziguli zinqunywa inkambo yezidakamizwa ezinciphisa igazi zihambisana nokuqedwa kwemithi elwa nokuvuvukala.
Isikhathi esingamahora ayi-12 ngaphambi kokuhlinzwa, iziguli kufanele ziyeke ukuthatha ukudla kanye noketshezi.
Lolu hlobo lokungenelela kwe-atherosclerosis lingesigaba sokukhulukazi, lunqunyelwe inkambo yesifo esithuthukile ikakhulukazi.
Uma isiguli singazilandeli izincomo zabodokotela esikhathini se-postoperative, amathuba okuphindeka kwezimpawu zesifo, ukubonakala kokufakwa kwemali okusha kwe-cholesterol, ukulimala kwe-ischemic emikhunjini kuphezulu.
Isikebhe sokulwa okwenzeka ezindlekeni ezithinteka ngama-plaque siyabhincwa. Ngemuva kwalokho, kuvela umphunga esikhunjeni ukukhipha i-artery esetshenzisiwe.
I-shunt ifakwe kokungabonakali okwenziwe ukuxhuma izingxenye eziseduze zomkhumbi.
Ngemuva kwalokho i-artery iyakhiwa, kufakwa idivaysi ekhethekile yokususa i-plaque enxebeni.
Udonga lwe-artery luhlanganiswa nesichibi esikhethekile ukubuyisa ubukhulu bayo.
Ngemuva kokuthi ukujikeleza kwegazi kubuyiselwe, i-artery iyagcotshwa, bese kufakwa ithumbu lokudonsa (elilodwa noma ngaphezulu) endaweni yokungenelela.
Ukuhlinzwa kwenziwa kusetshenziswa imishini ekhethekile yokuhlinza: isikhulisi se-binocular nesibonakhulu.
Isikhathi sokuhlinzwa sifinyelela emahoreni athile, kuye ngesilinganiso sokuthuthuka kwalesi sifo kanye nesimo sempilo jikelele sesiguli.
Nge-endarterectomy yemithambo yemilenze, kusetshenziswa izinhlobo ezimbili ze-anesthesia:
Okugcwele - ngokuphelele ukuvimba kokuzwela kobuhlungu. Kubandakanya ukulala kwesiguli kulo lonke ukuhlinzwa.
Kwendawo - kuvimba izinhlungu emkhakheni wezinqubo zokuhlinzwa. Kuboniswa kulabo abahola impesheni, iziguli ezinezifo ezijwayelekile zenhliziyo nemithambo yegazi, izifo ezinzima zamaphaphu.
Ngemuva kwalolu hlobo lokwelashwa okuhlinzwa kwe-atherossteosis, ukuvuselelwa kabusha kubandakanya isikhathi esijwayelekile kusuka ezinsukwini ezi-1-2 kuye ngesonto, ngemuva kwalokho isiguli sikhishwe esibhedlela. Ama-suture we-postoperative asuswa ngosuku lwesikhombisa.
Enye yezinhlobo zokungenelela - i-carotid endarterectomy - yenzelwa ukuqeda ukufakwa kwe-cholesterol ku-carotid artery. Ngaphambi kokuhlinzwa, iziguli ziphuculwe ingxenye yesikhumba, kuphakanyiswa izinzwa ezivamile, kuqashelwe umkhumbi ongashayi eceleni, kususwe ipulangwe, udonga lomthambo luhlanzwa, isilonda sihlanjululwe.
Ngemuva kosuku olungu-1 ngemuva kokuhlinzwa, iziguli zinqunyelwe ukwelashwa ngezidakamizwa:
Izidakamizwa ezinciphisa igazi: iWarfarin, Fragmin.
Ama-Angioprotectors: Detralex, Aescusan.
Ama-antibacterial agents weqembu le-penicillin.
Ama-Painkiller anomphumela wokulwa nokuvuvukala: Ibuprofen, Indomethacin.